Features Archives - Eleven Media Group
ထိုင်းပင်လယ်ထဲရှိ မြန်မာတို့၏ ကောင်းမှု စေတီတော်
Posted on April 22, 2018 by Eleven Media Group
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စူရဌာနီခရိုင် ကော့တောင်ကျွန်းပေါ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ တည်ထားသော စေတီတော်အား တွေ့ရစဉ်
တစ်မိုင်မက မြင့်တဲ့တောင်ထိပ်ကို ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့က တချို့၊ ခြေလျင်နဲ့က တချို့၊ ကားနဲ့က တချို့ မရောက်ရောက်အောင် တက်နေကြတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်ကလည်း ရခိုင်ရိုးမထဲက အန္တရာယ်ကုန်းဆင်းလို ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက်လမ်းမှာရှိတဲ့ ဖိုးပြန်တောင် အတက်လိုလို မတ်မတ်စောက်စောက်တွေချည်းပါပဲ။ ဒါတွေကို တစ်စက်ကလေးမျှ မစိုးရိမ် မထိတ်လန့်ဘဲ ယောက်ျားတွေ၊ မိန်းမတွေ စိတ်အားထက်သန်စွာ တက်နေကြတယ်။
သူတို့တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ငါတို့အားလုံး စုပေါင်းတည်ထား ကိုးကွယ်မယ့် စေတီတော် ဒီကနေ့ ထီးတင်တော့မယ်။ ငါတို့ရဲ့ ချွေးနဲစာနဲ့ရင်းပြီး ငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်အားနဲ့ ဖြစ်တည်တဲ့ ဒီစေတီတော်ကြီးဟာ နောင်ခါ ဒီကျွန်းပေါ်မှာ မြန်မာတွေ နေသွားပါတယ်ဆိုတာကို သက်သေခံမယ့် သမိုင်းမှတ်တိုင်ကြီးတစ်ခု ရေးထိုးရစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ မမောနိုင်မပန်းနိုင် လန်းဆန်းတက်ကြွစွာနဲ့ ဒီတောင်ထိပ်ကို တက်လာနေကြတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီလိုတက်နေကြတဲ့ အချိန်ကတော့ ၁၃၇၄ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်နေ့။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေ ၅ ရက် (စနေနေ့) နံနက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း စူရဌာနီခရိုင် ကော့တောင်ကျွန်းရဲ့ ဟတ်စလီတောင်မှာပါ။ ဒီက လူတွေက သူတို့ရဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ အက်ဒမန်ပင်လယ်ဘက်ကို အနောက်ပင်လယ်လို့ ခေါ်ကြပြီး သူတို့နေထိုင်ရာ အရှေ့ဘက်ခြမ်းက တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိရာကိုတော့ အရှေ့ပင်လယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒီကော့တောင်ကျွန်းကတော့ အရှေ့ပင်လယ်မှာရှိတာပေါ့။ ထီးတော်တင်မယ့် မင်္ဂလာအချိန်အခါကိုတော့ နံနက် ၉ နာရီ ၆ မိနစ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ထင်ပါရဲ့။ ၉ နာရီထိုးခါနီးအချိန်မှာတော့ ဘုရားပရိဝုဏ်တစ်ဝိုက်မှာ ထောင်ချီရှိနိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ စုရုံးရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ ဒီထီးတော်တင်ပွဲဟာ ဒီကျွန်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တာကြောင့်လည်း လူတွေက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြတာနေပါလိမ့်မယ်။ စေတီတော်တစ်ဆူ တည်ဖြစ်လာပုံကို ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး ကျွန်းမှာနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားအများစုက လေးစားကြည်ညိုတဲ့ ဦးလေးကြီး (ခ) ဦးနေလင်းက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ဆရာရေ ပြောရရင် ဒီဘုရားတည်ဖြစ်တာဟာ ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်)နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က စေတီပြင် ဆရာတော်တို့ ကြွလာပြီး တရားပွဲတွေ ကျင်းပဖြစ်ရာက ရလာတဲ့ကောင်းကျိုးအဆက်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတရားပွဲတွေအပြီးမှာ ကျွန်းမှာရှိတဲ့လူတွေ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့။ ဘာသာရေးဘက်မှာ လိုက်စားတဲ့သူတွေ များလာတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီစေတီတော် တည်ဖြစ်တာကတော့ ကမကထ ဦးအောင်မိုးဟာ အဓိကပါ။ သူ့ရဲ့ ဇွဲလုံ့လနဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် အခုလို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေစားသောက် အလုပ်လုပ်တဲ့ ဒီကျွန်းပေါ်မှာ စေတီတစ်ဆူ တည်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီအတွက် အင်မတန် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးနေလင်းဟာ ပဲခူးတိုင်းသားဖြစ်ပြီး ဒီကျွန်းမှာနေလာတာ အနှစ်၂၀နီးပါးရှိပြီမို့ နောက်ရောက်လာတဲ့ လူငယ်တွေက ဦးလေးကြီး ဦးလေးကြီးနဲ့ ခေါ်ကြရာက နာမည်ရင်း မထင်ရှားတော့ဘဲ ဦးလေးကြီးဖြစ်နေသူပါ။ ဟိုတုန်းက နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ ဆူနာမီ ရေလှိုင်းဒဏ်မခံရမီက ဖူးကက်ကျွန်းနဲ့ ဖန်င ကမ်းခြေတို့ကိုပဲ အပန်းဖြေနေရာအဖြစ် ရွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဆူနာမီနောက်ပိုင်းမှာတော့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည်တွေဟာ ပင်လယ်ကို ဖြတ်ပြီးသွားရတဲ့ ကော့တောင်ကျွန်း၊ ကော့စမွီကျွန်းနဲ့ ကော့ပဂန်းကျွန်းတို့ဘက်ကို ခြေဦးလှည့်လာခဲ့ကြပါတယ်။
အခုအခါမှာတော့ ဒီကျွန်းတွေက အပျော်ခရီးထွက်လာသူတွေအတွက် မရောက်ရင် မဖြစ်တဲ့နေရာတွေတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလို ခရီးသွားတွေများလာတာနဲ့အမျှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုထွန်းကားလာတာပေါ့။ ဒါကြောင့် အဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေက ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ အခုဆိုရင် ဒီကျွန်းပေါ်မှာ မြန်မာပြည်သား သောင်းနဲ့ချီပြီး ရှိရော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းပြောကြပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကတော့ ဒေသစုံက လာကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ မွန်၊ ကရင်၊ ထားဝယ်၊ မြိတ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးအများစုကတော့ တနင်္သာရီတိုင်းသူ ထားဝယ်တွေ၊ မြိတ်တွေပါပဲ။
ကော့တောင်ကျွန်းကလေးဟာ ပင်လယ်ပြင်မှာ အလွန်တရာလှပတဲ့ ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျွန်းကို အလည်ရောက်ခဲ့လို့ ကျွန်းပတ်လည်ကို စက်လှေနဲ့ ကြည့်ခွင့်ကြုံရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်သက်တာအတွက် မမေ့ရက်လောက်အောင် လှပတဲ့ အလှတစ်ပါးကို ခင်ဗျားကြည့်ခွင့်ရသွားပြီလို့ဆိုရင် အပိုပြောတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်မှာပါ။ မပိုပါဘူး။ အမှန်တကယ်ကို လှပတဲ့ ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျွန်းပေါ်မှာ စေတနာ၊ သဒ္ဓါတရားထက်သန်တဲ့ မြန်မာပြည်သား အလုပ်သမားတွေက စေတီတော်တစ်ဆူကို တည်ထားလိုက်တာကဖြင့် ဒီကျွန်းရဲ့ ကျက်သရေကို ပိုပြီးတင့်တယ်အောင် ပြုလုပ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစေတီတော်ကို အဓိက ကမကထပြုလုပ်တဲ့ ဘုရားဒကာ ဦးအောင်မိုးက ဒီလိုပြောပြပါတယ်။
“ဒီစေတီပုံတော်ကို တနင်္သာရီတိုင်းက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပါမောက္ခက ပုံစံပေးပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာဟန်ပါလာအောင် ထပ်ဆင့်ကြံစည်ပြီး ရေးဆွဲကြပါတယ်။ ပန်းရန်ဆရာတွေ ဘာတွေမငှားကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဦးစီးပြီး လူငယ်တွေနဲ့ တည်ပါတယ်။ ညအားတဲ့လူ ည။ နေ့အားတဲ့လူ နေ့ပေါ့။ နေ့မီး ညမီးနဲ့ တည်ကြတယ်လေ။ ပန္နက်ရိုက်တာက ဒီနှစ် နတ်တော်လပြည့်နေ့ပါ” တဲ့။
ဒီလိုမတ်စောက်တဲ့ တောင်ထိပ်ကို ဘိလပ်မြေအိတ်တွေကို ထမ်းပိုးသယ်ရွက်ကြတာ၊ အုတ်တွေကို ထမ်းတင်ကြတာ၊ အသေအချာ တွေးကြည့်ရင် ဒီဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့ စေတနာဟာ ဘယ်လောက်ထက်သန်နေသလဲဆိုတာ သိသာလှပါတယ်။
ဒီကနေ့ ထီးတော်တင်ပွဲမှာ ရခိုင်လုံချည်တွေ၊ ယောပုဆိုး ပလေကပ် အသစ်ကျပ်ချွတ်တွေနဲ့ ကော်လာကတုံးတွေ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူတွေကို ၀တ်ဆင်ထားကြတဲ့ လူငယ်လူရွယ် လူလတ်ပိုင်းတွေရယ်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်း လုံလုံခြုံခြုံ သိက္ခာရှိရှိ မြန်မာ့ထဘီ မြန်မာအင်္ကျီတွေနဲ့ ကျက်သရေ တင့်တယ်နေတာကို မြင်ရတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဟုတ်ပါလေစလို့ ထင်မိပါသေးတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ အရင်ရောက်နှင့်တဲ့ နောင်တော်တွေက အရင်းအနှီးကြီးကြီးပေးခဲ့ရပုံကို ရခိုင်ပြည်နယ်က မာန်အောင်ကျွန်းသားဖြစ်တဲ့ ဦးကာရီက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ဆရာ ဒီကျွန်းမှာ အရင်က သနပ်ခါး ပါးကွက်ကျားကွက်ရင် ဘတ် ၅၀၀ ဒဏ်ရိုက်ခံရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်မြန်မာပြည်သားမှန်း မသိရလေအောင် တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းသိမ်းနေရတယ်။ ဒီမှာက အရင်က ရဲလည်းကြောက်ရသလို ကျွန်းပေါက်လို့ခေါ်တဲ့ ဒေသခံကျွန်းသားတွေကိုလည်း ကြောက်ရတယ်။ ကျွန်းပေါက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ကိုထား။ ရဲတွေတောင် လန့်ရတယ်ဆရာ။ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ စုပေါင်းပြီး ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေ ဟည်းထနေပြီး ညစ်ပတ်နေတဲ့ ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးကြတယ်။ ကော့တောင်ကျွန်းမှာ ရေကြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ စုပေါင်းပြီး ရေစီးရေလာကောင်းအောင် ၀ိုင်းပြီးလုပ်ပေးကြတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျွန်းလူကြီးတွေ၊ အာဏာပိုင်တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေက သဘောကျလို့ အခုလို လုံချည်တကားကားနဲ့ နေလာနိုင်ကြတာ ဆရာ” လို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို တသီတတန်းကြီး ပြောပြသေးတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေထဲက သံတူကြောင်းကွဲ ဇာတ်လမ်းတွေပဲပေါ့။ နေရာသာ ကွဲမယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ ဆင်တူချည်းပါပဲ။
ဒီစေတီတော် တည်မယ့်မြေနေရာကိုလည်း ကမကထ ကိုအောင်မိုးတို့ အလုပ်ရှင်က ၀ယ်ပေးတာတဲ့။ ဒီထိုင်းကြီးကတော့ တစ်မျိုးထူးတယ်။ သူ့မြေထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကို ကိုးကွယ်ထားသလို တရုတ်ကိုးကွယ်မှုဖြစ်တဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တော် ကျောင်းဆောင်လည်း ရှိတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဟိန္ဒူတွေကိုးကွယ်တဲ့ မဟာပိန္နဲနတ်ဘုရားကိုလည်း တွေ့ရသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီမှာ မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့ခဲ့ရတာ တစ်ခုကတော့ အင်မတန်အသံကောင်းပြီး မြန်မာသံစဉ်ကို တကယ့်ဝါရင့်အဆိုတော်ကြီးတွေလို သီဆိုနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရယ်။ ထီးတော်တင်ပွဲကို ဂုဏ်ပြုပြီး သီချင်းရေးစပ် သီကုံးနိုင်တဲ့ တေးရေးစာဆိုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူလိုငါလို ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဘ၀နဲ့ သူတို့ရဲ့ပါရမီရှိတဲ့ ဂီတပညာကို ရွက်ပုန်းသီးအဖြစ် ပင်လယ်ပြင်မှာ ငုပ်လျှိုးနေရာက အခွင့်သာခိုက်မှာ မီးခဲပြာဖုံး ဟုန်းခနဲ ထတောက်တာကို မြင်ခဲ့ရတာ ၀မ်းသာလို့ မဆုံးပါဘူး။ ကီးဘုတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ တစ်ပွဲလုံးကို ထိန်းသွားကြတာပါ။ အားလုံးဟာ မိတ်အင်ကော့တောင်တွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ပွဲကိုမြိုင်စေတဲ့ ဒိုးအဖွဲ့ကလည်း ပါလိုက်သေးတယ်။ ဒီထီးတော်တင်ပွဲမှာ အရာအများစုက တကယ့်ကို မိတ်အင် ကော့တောင်တွေ များပါတယ်။ မိတ်အင်ကော့တောင် မဟုတ်တာကတော့ စေတီမှာ ဌာပနာမယ့် ဓာတ်တော်မွေတော်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ တနင်္သာရီတိုင်းက ပင့်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီး တရားဟောဆရာတော်ကတော့ ဘန်ကောက်မြို့ ၀ပ်တလုမ့်ကျောင်းက ပင့်တာပါ။ ဧည့်သည်ဆိုလို့ အထူးတလည် ဖိတ်ထားတဲ့ ချုံဖော်နဲ့ ကော့စမွီကျွန်းက တချို့နဲ့ ဘန်ကောက်က ကျွန်တော်တစ်ယောက်ရယ်ပဲ ကျွန်းအပြင်က ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစေတီတော်ရဲ့ ဘွဲ့တော်က အဓိဋ္ဌာန်ပြည့် ကိုးန၀င်း ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော် ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မိတ်ဆွေလည်း အခါသင့်လို့ ကော့တောင်ကျွန်းကို ရောက်ခဲ့ရင် ဟတ်စလီတောင်ပေါ်မှာ စံပယ်တော်မူနေတဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ပြည့်ကိုးန၀င်း စေတီတော်ကို ဖူးမြော်ဖြစ်အောင် ဖူးမြော်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် ရာဇ၀င်အဆူဆူမှာ မင်းဘုရင်တွေရယ်၊ သူဌေးသူကြွယ်တွေနဲ့ အများပြည်သူ စုပေါင်းပြီး ဘုရားတည်လေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီစေတီတော်ကတော့ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားတွေက တည်တာဖြစ်ပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းရာထောင် ရှည်လာတဲ့အခါ ဒီအရပ်မှာ မြန်မာပြည်သားတွေ လာရောက် နေထိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်း သက်သေခံအနေနဲ့ တည်ရှိနေမယ်ဆိုတာကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
Posted in FeaturesTagged စူရဌာနီခရိုင်, ကော့တောင်ကျွန်းLeaveaComment on ထိုင်းပင်လယ်ထဲရှိ မြန်မာတို့၏ ကောင်းမှု စေတီတော်
The Boy in the Striped Pyjamas ဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်း
“စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ ရွေးချယ်စရာဆိုတာမရှိဘူး၊ တာဝန်ဆိုတဲ့အရာကြီးပေါ်မှာ ဘ၀တစ်ခုလုံး ပုံအပ်ထားရတာဖြစ်တယ်၊ မင်းဘယ်နေရာသွားပြီး ဘာတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုက်ဆိုတဲ့ အမိန့်ရရင် သွားလိုက်ရုံပဲ၊ ဘာဆင်ခြေမှပေးလို့မရဘူး” လို့ နာဇီအဆင့်မြင့်စစ်အရာရှိကြီး ‘ရပ်ဖ်’ ဆိုသူက ရှစ်နှစ်အရွယ်သူ့သားလေး ‘ဘရူနို’ ကို ရှင်းပြနေပါတယ်။ အချိန်ကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး အတွင်းမှာဖြစ်ပြီး နေရာကတော့ ဘာလင်မှာပါ။ ဘရူနိုဟာအမေဖြစ်သူ ‘အယ်ဆာ’၊ အသက် ၁၂ နှစ်သမီးအရွယ် အစ်မဖြစ်သူ ‘ဂရက်တယ်’၊ အိမ်ဖော်မလေး ‘မရီးယာ’ တို့နဲ့အတူ ဘာလင်ကအိမ်မှာနေပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ Fury ဆိုတဲ့လူကြီးကခိုင်းလို့ ဘရူနိုရဲ့ရဲ့အဖေဟာ ရာထူးတိုးပြီး ‘အောက်ဝစ်’ Out-With ဆိုတဲ့နေရာကို ပြောင်းရတော့မယ်လို့ ဘရူနို သိလိုက်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘရူနိုက ကလေးမို့မသိလို့ပါ။ အဲဒီလူကြီးက Fury ‘ဖျူရီ’ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျာမန်စာလုံးဖြစ်တဲ့ Fuehrer ‘ဖျူးရား’ သာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ The Leader ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့။ နောက်တစ်ခါ သူနားထဲမှာကြားနေတဲ့ ‘အောက်ဝစ်’ ဆိုတာဟာလည်း အော့စ်ဝစ်ဇ် Auschwitz ဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်ကြီးသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ အိုင်းရစ်ရှ် စာရေးဆရာ ‘ဂျွန်ဘွိုင်း’ (John Boyle, born 1971) ရေးသားတဲ့ The Boy in the Striped Pyjamas ဆိုတဲ့ဝတ္ထုထဲက အကြောင်းအရာတွေပါ။ ဒီဝတ္ထုဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ နာမည်တူနဲ့ပဲ ရုပ်ရှင်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး အခုဝတ္ထုနဲ့ ရုပ်ရှင်နှစ်ခုစလုံးထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရူနိုဟာ ဒီလိုနဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ဘာလင်မြို့ကြီးကနေ နယ်မှာရှိတဲ့ အောက်ဝစ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကို ပြောင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ နေရာသစ်က အိမ်ကြီးရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဟိုအဝေးမှာ လယ်ကွင်းလိုလို လယ်တဲလိုလို ဟာမျိုးတွေကို ဘရူနို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက လယ်သမားတွေဟာ ဒေါင်လိုက်အစင်းကျားတွေပါတဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီတွေကို ဆင်တူဝတ်ထားကြလို့ပါပဲ။ နောက်ဒီထက်ပိုထူးဆန်းတာက အဲဒီလိုအင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ အသက် ၆၀ အရွယ် လူကြီးတစ်ယောက် ဘရူနိုတို့အိမ် မီးဖိုချောင်ထဲ ရောက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ပဲဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာအမြဲလိုလိုရှိနေတတ်တဲ့ ‘ဗိုလ်ကော်တလာ’ ဆိုသူက အဲဒီလူကြီးကို ဒန်းလုပ်ခိုင်းလို့ အဲဒီလူကြီးက ကားတာယာဟောင်းတစ်ခုကို ကြိုးနဲ့သိုင်းပြီး သစ်ပင်မှာဆွဲထားတဲ့ ဒန်းတစ်ခု သူ့အတွက်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဘရူနိုဟာ ဒန်းစီးနေရင်းနဲ့ ဟိုအဝေး လယ်တဲတွေဘက်ဆီက မီးခိုးတွေထွက်လာတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ဒန်းပေါ်ကနေ မတ်တတ်ရပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒန်းပေါ်ကနေအောက်ကို ပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီလူကြီးကပဲ သူ့ကိုအိမ်ထဲပွေ့ခေါ်သွားပြီး ပွန်းသွားတဲ့ ဘရူနိုရဲ့ဒူးခေါင်းကို ဆေးထည့်ပေးပါတယ်။ ဆေးထည့်ပေးရင်းနဲ့ ဆေးထည့်တာ ကျွမ်းကျင်လွန်းလို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီလူကြီးဟာ တစ်ချိန်က ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဆိုတာနဲ့ သူ့နာမည်ဟာ ‘ပါဗယ်’ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါ သိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ ပါဗယ်ဟာ အခုဘာဖြစ်လို့ သူတို့အိမ်ကြီးထဲမှာ အာလူးတွေအခွံသင်နေရသလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဘရူနိုမသိခဲ့ပါဘူး။
နောက်တစ်နေမှာတော့ အဖေစီစဉ်ပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာမစ္စတာ ‘လိုက်စ်’ ဆိုသူ စက်ဘီးစီးပြီး အိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ လိုက်စ်ဟာ ဘရူနိုတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်အတွက် အောက်ဝစ်ရဲ့တစ်ခုတည်းသော ရွေ့လျားစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ဘရူနိုဟာ အမေ့စကားနားမထောင်ဘဲ နောက်ဖေးပေါက်ကနေ လယ်တောတွေရှိရာဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ တောအုပ်တစ်ခုကို ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သံဆူးကြိုးတွေခတ်ထားတဲ့ ခြံစည်းရိုးကြီးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ခြံစည်းရိုးထဲမှာ ထိုင်နေပြီး သူနဲ့သက်တူရွယ်တူလောက်ရှိတဲ့ ‘ရှမူး’ လို့အမည်ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့လည်း သိကျွမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ရှမူးက “ငါဆာလွန်းလို့ မင့်မှာစားစရာပါရင် ငါ့ကိုကျွေးစမ်းပါ” လို့လည်း သူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ ဘရူနိုဟာ အမေမသိအောင် မုန့်တွေကိုယူယူလာပြီး ရှမူးလ်ကို ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရှမူးရဲ့အဖေဟာ အရင်က နာရီဆိုင်ဖွင့်ပြီး နာရီရောင်းခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ ဘွတ်ဖိနပ်တွေ ချုပ်နေရကြောင်း၊ ရှမူးရဲ့ အဘိုးနဲ့အဘွားဟာ အောက်ဝစ်ကိုလာနေစဉ်အတွင်း လမ်းမှာနေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆုံးခဲ့ကြရတဲ့အကြောင်းနဲ့ အောက်ဝစ်ကိုရောက်တော့ သူနဲ့အဖေက အတူတူနေရပြီး အမေက တခြားမှာနေရတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း ရှမူးပြောပြလို့ ဘရူနို သိခဲ့ရပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ဗိုလ်ကော့တလာ့ပါးစပ်က လွှတ်ခနဲထွက်သွားလို့ စက်ရုံခေါင်းတိုင်တွေထဲက ထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေဟာ ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်တောင် အနံ့ပြင်းနေရသလဲဆိုတာကို အယ်ဆာသိသွားလို့ ယူကျုံးမရဖြစ်ပြီး ချုံးပွဲချငိုမိပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူအပေါ်မှာ ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်ထိ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ရတာလဲလို့ ခင်ပွန်းသည်ရပ်ဖ်ကို အယ်လ်ဆာက မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ခင်ပွန်းသည်က “ငါက အဖနိုင်ငံတော်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ငါ့ကြောင့်မပေါက်ကြားစေရပါဘူးဆိုပြီး ကျန်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုထားခဲ့ရတာကွလို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ညနေစာအတူစားနေကြရာက ရပ်ဖ်က ဗိုလ်ကော့တလာ့ရဲ့ အဖေအကြောင်း စကားစပ်မိသွားလို့ မေးရင်းမေးရင်းနဲ့ ကော့တလာရဲ့အဖေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်က ဆွစ်ဇာလန်ကို ထွက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်း ကော့တလာ ၀န်ခံလိုက်ရပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးတကြီး လူတော်တွေလိုအပ်နေချိန်မှာ ခုလိုမျိုး တစ်ပြည်တစ်ရွာကို ထွက်ခွာသွားတာဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒကို မနှစ်မြို့လို့ကလွဲပြီး တခြားဘာမှဖြစ်နိုင်စရာ မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ ဒီအကြောင်း အထက်ဌာနကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သတင်းပို့ဖို့ ကော့တလာ ပျက်ကွက်ခဲ့တာဟာလည်း မရိုးသားတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဗိုလ်ကော့တလာ မငြင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရပ်ဖ်က မင့်ကို ငါရှေ့တန်းကို အမြန်ဆုံးပို့တော့မယ်လို့ ထမင်းစားဝိုင်းမှာပဲ ကော့တလာ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခဏအကြာမှာ စားပွဲထိုးအလုပ်ကိုပါ လုပ်ပေးနေရတဲ့ ပါဗယ်ဟာ ကော့တလာရဲ့ဖန်ခွက်ထဲကို ၀ိုင်ထည့်ပေးတဲ့အခါ လက်နဲ့တိုက်မိပြီး ဖန်ခွက်မှောက်သွားလို့ စားပွဲခင်းပေါ်မှာ ၀ိုင်တွေစွန်းထင်းသွားပါတော့တယ်။ ကော့တလာလည်း ပါဗယ့်ကိုမဲပြီး အပြင်ကိုဆွဲထုတ်သွားပါတော့တယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပေကျံနေတဲ့သွေးတွေကို ၀က်မှင်ဘီးနဲ့ ပွတ်တိုက်ဆေးကြောနေတဲ့ မရီးယာ့ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျမှ ပါဗယ်ရဲ့ကံကြမ္မာကို ဘရူနို သိလိုက်ရတော့တာပါ။
နောက်တစ်နေ့ညနေမှာ အိမ်ထဲရောက်နေတဲ့ ရှမူးကို တွေ့လိုက်ရလို့ “ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ” လို့မေးတော့ ရှမူးက “ငါ့လက်သေးသေးလေးတွေက ဒီဖန်ခွက်တွေကို ဆေးရသုတ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေလို့ သူတို့က ငါ့ကို ဒီခေါ်လာကြတာကွ” လို့ပြန်ဖြေပြီး စားပွဲပေါ်က ၀ိုင်ဖန်ခွက်တွေကို မေးငေါ့ပြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘရူနိုက စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ကိတ်မုန့်တွေကို ယူကျွေးလို့ ရှမူးလည်း အငမ်းမရစားမိပါတယ်။ ပြဿနာက အဲဒီအချိန် ကော့တလာရောက်လာပြီး ကိတ်မုန့်တွေစားနေတဲ့ ရှမူးကို လက်ပူးလက်ကြပ်မိသွားလို့ပါပဲ။ “ကိတ်မုန့်တွေ ဘယ်ကရလာတာလဲ” လို့ ကော့တလာကမေးတော့ “ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဘရူနိုကပေးလို့ စားမိတာပါ” လို့ ရှမူးက ဖြေပါတယ်။ ကော့တလာက ဘရူနို့ကို လှည့်ကြည့်ပြီး “လူလေး မင်းဒီကောင့်ကိုသိသလား” လို့မေးတော့ ဘရူနိုကကြောက်ပြီး “မသိပါဘူး” လို့ ညာပြီးဖြေလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကော့တလာက ရှမူးကို “မင်းနဲ့ငါနောက်မှ အေးအေးဆေးဆေးတွေ့မယ်” လို့ပြောပြီး ဘရူနို့ကိုတော့ လာသွားကြစို့လို့ဆိုပြီး အပြင်ကို ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်။ ဘရူနိုလည်း သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာ သစ္စာမဲ့တဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်မိသလိုဖြစ်သွားလို့ တောင်းပန်ရအောင် ပြန်သွားကြည့်တဲ့အခါ ရှမူးကို မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ နောက်နှစ်ရက်လောက် ကြာသွားပြီး ရှမူးကို ခြံစည်းရိုးထဲမှာ ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါ ရှမူးရဲ့မျက်နှာလေးကတော့ ဖူးရောင်ညိုမည်းလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူကပြန်တောင်းပန်တဲ့အခါ ရှမူးက ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ပြောလို့ အရူနို နေသာထိုင်သာ ရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရက်များမကြာခင်မှာ ဘာလင်ဗုံးကြဲခံရပြီး ရပ်ဖ်ရဲ့အမေ ဘရူနိုရဲ့အဘွား ဆုံးသွားပါတယ်။ ရပ်ဖ်လည်း ဇနီးသည်နဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကို အောက်ဝစ်မှာ ဆက်မထားချင်တော့လို့ တခြားမြို့လေးတစ်မြို့က သူ့ညီမ အိမ်မှာသွားထားဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရှမူးမှာလည်း အဖေဖြစ်သူစခန်းထဲက ခဏအပြင်ထွက်သွားပြီး ပြန်မလာလို့ သူ့ပြဿနာနဲ့သူပါ။ ဘရူနိုလည်း သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာ အကြွေးတစ်ခု တင်နေတာ ကျေသွားအောင် ငါဝိုင်းရှာပေးမယ်ဆိုပြီး ကတိပေးလိုက်မိပါတယ်။ ဘရူနိုတို့ ပြောင်းကြမယ့်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ ဘရူနိုဟာ ရှမူးနဲ့သွားတွေ့ပါတယ်။ ပထမ ဘရူနိုဟာ သူ့အ၀တ်အစားတွေ ကိသံဆူးကြိုး အပြင်ဘက်မှာချွတ်ပြီး ရှမူးယူလာတဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီအစင်းကျားကို ၀တ်ပါတယ်။ နောက်မှဂေါ်ပြားနဲ့ သံဆူးကြိုးအောက်က မြေကြီးကိုတူးဆွပြီး မြေအောက်ကနေ ခြံစည်းရိုးထဲကို လျှိုဝင်သွားခဲ့တာပါ။ နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အိပ်ဆောင်တစ်ခုထဲဝင်ပြီး ရှမူးရဲ့အဖေကိုရှာနေတုန်း အဲဒီအိပ်ဆောင်ထဲက လူတွေအားလုံးကို စစ်သားတွေက တခြားအိပ်ဆောင်တစ်ခုထဲကို မောင်းသွင်းလို့ သူတို့နှစ်ယောက်လည်း ရောယောင်ပါသွားကြပါတယ်။ နောက်တော့ အ၀တ်တွေချွတ်ခိုင်းလို့ ရေချိုးခိုင်းမယ်ထင်ပြီး အားလုံးချွတ်လိုက်ကြပါတယ်။ အားလုံးကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့အခါ အခန်းတစ်ခန်းထဲဝင်ခိုင်းပြီး သံတံခါးမကြီးတွေကို အသေပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျမှ အားလုံးကြောက်သွားကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘရူနိုတို့အိမ်မှာလည်း ဘရူနို့ကို ရှာမတွေ့တော့လို့ ပွက်ပွက်ရိုက်နေပါပြီ။ ဘရူနို့အဖေကတော့ အနံ့ခံခွေးတွေ အကူအညီနဲ့ သားကိုလိုက်ရှာပါတယ်။ သံဆူးကြိုးတွေနားမှာ ဘရူနိုချွတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘရူနိုရဲ့အမေဟာ အော်ဟစ်ငိုယိုပါတော့တယ်။ ဘရူနို့အဖေလည်း စစ်သားတွေအများကြီးနဲ့အတူ စခန်းထဲကို အတင်းလိုက်ဝင်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ကျသွားပါပြီ။ ခန်းမကြီးရဲ့ သံတံခါးတွေ အလုံပိတ်သွားကြရုံမက ခေါင်မိုးမှာရှိတဲ့ အပေါက်ကြီးတွေကနေ အဆိပ်ငွေ့တွေကိုတောင် လွှတ်လိုက်ပြီးပြီဖြစ်လို့ ဘာမှလုပ်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်ခဏအကြာမှာ ရုပ်ရှင်လည်း ပြီးသွားပါတော့တယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်နေကြလို့ အဲဒီအကြောင်းတွေကို မဆွေးနွေးချင်တော့ပါဘူး။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းမှာ ဘရူနိုနဲ့သူ့အဘိုးတို့ ပြောခဲ့ကြတဲ့ စကားတစ်ခွန်းအကြောင်းကိုပဲ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ အောက်ဝစ်ကို ဘရူနို့အဘိုး အလည်ရောက်လာတဲ့အခါ အဘိုးက ဘရူနို့ကို သားရဲ့ဆရာ မစ္စတာလိုက်စ်က သားတို့ကို ဘာတွေသင်ပေးတာလဲကွလို့ မေးတော့ ဘရူနိုက “အလကားပါအဘိုးရာ တစ်ခါလာလည်းသမိုင်း၊ တစ်ခါလာလည်းသမိုင်းနဲ့ သားဖြင့်စိတ်မ၀င်စားပါဘူး” လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဘိုးဖြစ်သူက “အဘိုးတို့သာ သားလိုသမိုင်းကို ရှေးတုန်းက စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူးဆိုရင် အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မြေးလေး ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီး ဒီလိုအစားအစာတွေကို စားနေနိုင်ဖို့နေနေသာသာ ဘယ်နေရာရောက်နေမှန်းတောင် သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး မဖြစ်ခင်နဲ့ ဖြစ်နေဆဲမှာ ဂျာမဏီဟာ အောင်မြင်တာ ကျဆုံးတာ အပထားလို့ သူမှန်တယ်ထင်တာကို သူလုပ်သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်တယ်။ မအောင်မြင်လို့ ကျဆုံးသွားတော့လည်း ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက သူ့နိုင်ငံရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သင်ခန်းစာယူကြရုံပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းတူ အောင်မြင်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကိုလည်း သင်ခန်းစာယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တို့ဟာ အဲဒီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာ သင်ခန်းစာမယူနိုင်ရင်တောင်မှ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုတော့ ကိုယ်မေ့မထားဘဲ သင်ခန်းစာယူကြရမှာပါ။ ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သမိုင်းကိုစိတ်မ၀င်စားလို့ မရနိုင်သလို မေ့ထားလို့လည်း မရနိုင်ပါလားဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားကြည့်အပြီးမှာ သဘောပေါက်သွားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in FeaturesLeaveaComment on အင်္ကျီအစင်းကျားနဲ့ တခြားကမ္ဘာကသူငယ်
တကယ်တော့ သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ရေးခဲ့ဖူးတာ ရှားပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက ရွာတစ်ရွာကို ရောက်သွားတဲ့ အခိုက်အတန့်ကလေးတစ်ခုအကြောင်း ကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်ကထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ရေးဖူးတာလောက်ပဲရှိတယ်။ သင်္ကြန်ခံစားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးဖူးတဲ့ ကဗျာတချို့တော့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါလည်း ဘယ်မှမပို့ဖြစ်၊ ဘယ်မှလည်းမပါတဲ့ ကဗျာတွေပါပဲ။ ဒီနှစ်တော့ သင်္ကြန်တွင်း အိမ်ထဲအောင်းပြီး စာရေးမယ်လို့ တွေးထားပေမယ့် လက်တွေ့ကျရေးမရပြန်ဘူး။ စကားပြေဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ စိမ်းသက်နေတဲ့ နယ်မြေဆိုတော့ စကားပြေတစ်ပုဒ်ရေးတိုင်း စိတ်ကတွန့်နေမိတာ များပါတယ်။
မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်္ကြန်ဆိုတာ လူမှန်းသိတတ်စကတည်းကနေ အခုအရွယ်အထိ တွေ့ထိခဲ့ရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြောပလောက်စရာ အမှတ်တရဆိုတာမျိုးတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ နှစ်တစ်နှစ် ကုန်သွားတယ်။ နှစ်တစ်နှစ် ထပ်ရောက်လာတယ်။ မထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထက် ပိုပြီးစိတ်ထဲ ဘာမှသိပ်မထူးဆန်းဘူး။ သင်္ကြန်ရောက်ရင် သင်္ကြန်သီချင်းတွေ ညည်းမိတာလောက်၊ သင်္ကြန်တွင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်ရင် ရေလောင်းခံရတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ အိမ်နဲ့ အဝေးမှာနေတဲ့ ကာလတွေတုန်းကတော့ သင်္ကြန်ဆိုတာနဲ့ အိမ်ကို ပြန်ရတာလောက်နဲ့ ပျော်နေဖြစ်တာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်တော့ သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုရေးမယ်လို့ တွေးမိတယ်။ လုပ်ယူဖို့ တွေးထားလို့လား မသိပါ။ သင်္ကြန်သာ ရောက်လာတယ် ဘာမှ ဟုတ္တိပတ္တိ ရေးမရဘူး။ အဲ့ဒါအပြင် ရေးလက်စတွေတောင် အပြီးသတ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
သင်္ကြန်ခံစားမှုစာကို မြန်မာ့ရိုးရာဆိုတာ ဘယ်လိုဘယ်ညာတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရမယ် ဆိုတာမျိုးတွေလည်း မရေးချင်ဘူး။ နီရူဒါက ပိတောက်ကို ဗဒေါက်ဆိုပြီး အသံထွက်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း ဖတ်ဖူးတဲ့စာတစ်ပုဒ်နဲ့ စတင်ရမလား။ ဒါမှမဟုတ် ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ပိတောက်ပန်းကဗျာကို ဘယ်လိုခံစားမိတယ်၊ ဘယ်လိုဆင်ခြင်မိတယ် အဲ့ဒီလိုတွေ ရေးရင်ကောင်းမလား။ အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးနဲ့ ကြိုးခုန်နေပေမယ့် လက်တွေ့ကျ ဘာမှမရေးနိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေရတယ်။ မြို့ထဲက ကြားရတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေကို ရေးရမလား၊ မဏ္ဍပ်မှာ ကခုန်ရင်း အချုပ်ကားထဲ ရောက်သွားတဲ့ လူတွေအကြောင်း ရေးရမလား။
သရုပ်ပျက် ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲဘယ်လိုတွေ ခံစားမိတယ်ဆိုတာတွေ ရေးရမလား။ တုန်ယင်နေတဲ့ လက်နဲ့ မြားပစ်သမားဟာ ပစ်မှတ်နဲ့ ဝေးခဲ့တယ်။ မတိကျတဲ့ စုတ်ချက်တွေဟာ ပန်းချီကားကို ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်။ မဖြောင့်မတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဟာ သူ့ခေတ်ကို ညစ်နွမ်းစေလိမ့်မယ်။
သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း စကားပြေတစ်ပုဒ် ပီပီပြင်ပြင် ရေးမယ်လို့ တွေးခဲ့တာကတော့ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလို စကားပြေတွေ အတော်များများ မရေးဖြစ်သေးတဲ့ ဟိုဘက်နှစ်တွေကတည်းကပဲ။ ကဗျာဆရာ နေမျိုးရဲ့ ဒုလ္လာဘ၀တ်ပြီးတော့ ရက်စွဲတွေနဲ့ရေးတဲ့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆန်ဆန် သင်္ကြန်ပြီး အက်ဆေးတွေကို ကြိုက်မိတော့။ တစ်နှစ်တော့ ကျွန်တော် ဒုလ္လာဘ၀တ်ဖြစ်တဲ့အခါ ဆရာ့လို ရေးကြည့်ဖို့ ကြိုးစားဖူးတယ်။
ဘယ်လိုမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ သင်္ကြန်တွင်း ဒုလ္လာဝတ်တာဟာ လူဘ၀မှာ နေတာထက် အကုသိုလ် ပိုများပါလားဆိုတဲ့ အသိတစ်ခု ရလိုက်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ နေရာထက် ကိုယ့်စိတ်က ပိုအရေးကြီးမှန်း သိလိုက်ရတာကတော့ အမြတ်ပေါ့။ ဒီနှစ်တော့ ရေးဖြစ်အောင် ရေးမယ်လို့ အားခဲထားပြီး သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကတည်းက ဖတ်ရမယ့် စာအုပ်တွေစုထားတယ်။ ရေးရမယ့် စာတွေကို အစီအစဉ် ချထားတယ်။ တကယ်တမ်းကျ အာရုံကို စာရေးစာဖတ်တဲ့ဆီကို ဆွဲခေါ်လို့ မရအောင် ဖြစ်နေမိတယ်။ စိတ်ထဲကနေလည်း တကယ့်ဆရာတွေလို စာရေးပြီး အသက်မွေးရင် ငါတော့ ငတ်သေမှာပဲလို့လည်း တွေးနေမိပြန်တယ်။
တကယ်တော့ ရေးမယ်ဆို ရေးစရာတွေချည်းပဲ မဟုတ်လား။ သင်္ကြန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်၊ အနှစ်သာရ။ ၀ါဝင်းတောက်ပနေတဲ့ ပိတောက်နဲ့ ငုဝါပန်းအကြောင်း။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ရေကစားကြပုံတွေ။ စတုဒိသာကျွေးပုံတွေ။
သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရင်ဆရာတွေ၊ အခုဆရာတွေရဲ့ ကဗျာတွေ၊ စာတွေဆို အများကြီးပဲ။ ရေးမယ်ဆို ရေးစရာတွေချည်း။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ရေးလို့မရဘူး။ ခေါင်းပူအောင် တွေးလေ ဘာတစ်ခုမှ ထွက်မလာလေပဲ။ ဒါကို ကြည့်ရင်ပဲ စာရေးတဲ့ဘက်မှာ ကျွန်တော် ညံ့ဖျင်းကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်။ စာအုပ်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်၊ ပြန်ချလိုက်။ ဘောလ်ပင်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်၊ ပြန်ချလိုက်နဲ့ ဣနြေ္ဒမရဖြစ်ရတဲ့နေ့ပဲ။ အချိန်နဲ့ ဒီရေက လူကို မစောင့်တဲ့။ သင်္ကြန်ကလည်း မစောင့်ပါဘူး။ ခပ်တည်တည် ရောက်ချလာတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ငေးနေရုံပေါ့။ အကျနေ့ကျ သူငယ်ချင်းက ခေါ်တာနဲ့ မြို့ထဲထွက်ခဲ့တယ်။ ဆူညံနေတဲ့ လူသံတွေ၊ ဆိုင်ကယ်သံတွေနဲ့ ရေရွှဲနေတဲ့လမ်းမတွေ။ မြို့ဟာ စိတ်ရှိသလို ခုန်ပေါက်မြူးထူးနေလေရဲ့။
စင်ပေါ်က လူတွေရဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းတွေ ကြားရတော့ ငယ်ကတည်းက ကြားနေရတဲ့ သီချင်းတွေကို အခုထိ ဖြောင့်အောင်၊ ချောအောင်၊ စာသားမှန်အောင် ဘာလို့မဆိုနိုင်ကြတာလဲလို့ တွေးမိတယ်။ တီးဝိုင်းက သံစဉ်တွေကလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုချာလေလို့ ထင်မိတယ်။ စက်အခက်အခဲ၊ ပညာအခက်အခဲတွေလည်း ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ တွေးဖြေကြည့်မိတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေ ကြည့်လိုက်ရင် ကြီးကောင်ကြီးမားတွေပဲ တက်ပြီး ကဲနေ ဟဲနေကြတာကို ကျွန်တော် ဘ၀င်မကျဘူး။ လူငယ်တွေကို ပွဲထုတ်ပေးသင့်တယ်လို့ မြင်မိတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့်မြို့ကလည်း အနုပညာကို တန်ဖိုးထား အားပေးတတ်တဲ့မြို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပွဲတော်တဲ့ဟေ့ဆို ပိုက်ဆံဝါလားကြီးတွေ မူးရူးပြီး အချင်းချင်း လက်ခုပ်တီးမြှောက်ပင့်နေကြတာပဲ မြင်ရတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဗဟိုမဏ္ဍပ်ဆိုတာ အကောင်ကြီးကြီးနဲ့ သူ့သားသမီး မိတ်ဆွေတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာပဲ။ အခုတော့ အဲ့လိုတွေ ရှိသေးလားတော့မသိ။ မူးနေကြတဲ့ စင်အောက်ကလူတွေကလည်း သီချင်းအနှစ်သာရ ဘာညာတွေ သိပ်မစဉ်းစားကြပါဘူး။ ခုန်ပေါက်လို့ရရင် ပြီးတာပါပဲ။ အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာတောင် သူ့အိုးနဲ့ သူ့ဆန်တန်အောင် မဆိုနိုင် မတီးနိုင်ကြတာ အတော့်ကို ညံ့လို့ဖြစ်မယ်လို့ ကောက်ချက်ချမိတယ်။ ကိုယ်ကသာ ကြောင်တောင်တောင် တွေးနေမိတာပါ။
တကယ်က သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဆိုတာကလည်း စီးပွားရေးကွင်းပြင်တစ်ခုပဲ မဟုတ်လား။ အနုပညာတွေ ဘာတွေ တွေးနေတဲ့ ကျွန်တော်က မရူးနှမ်းဘူးလား။ သူငယ်ချင်းက လာခေါ်လို့ မြို့ထဲက မဏ္ဍပ်တွေဘက် ရောက်ခဲ့ပြီး ဆိုနေ၊ တီးနေကြတာကို တွေ့ရတော့ အကုသိုလ် ဖြစ်မိတာတွေပါ။ သူငယ်ချင်းက သွားကကြရအောင်ဆိုတော့ မကတတ်ဘူးလို့ငြင်းပြီး မဏ္ဍပ်ဘေးရပ်ပြီး ကနေကြတဲ့ လူတွေကို ငေးနေမိတယ်။ စင်ပေါ်က ကျလာတဲ့ ရေတွေရွှဲစိုလို့ ကခုန်နေကြတဲ့ လူတွေ။ သူတို့ဟာ သူတို့တော့ ပျော်နေကြတဲ့ပုံပဲ။ ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ မထိတွေ့ဖူးတဲ့ လူတွေလို။ နာကျင်မှုတွေ၊ ဒဏ်ရာတွေကို မမြည်းစမ်းဖူးတဲ့ လူတွေလို။ အပူအပင်တွေ လုံးဝ ကင်းစင်နေကြတဲ့ပုံအတိုင်း။ ပျော်စရာဆိုတာ ထိုက်တန်တဲ့ လူတွေပဲ ရနိုင်တဲ့အရာလိုပါပဲ။ အရွယ်စုံ၊ အရောင်စုံ ယိုင်ထိုးပြီး ကခုန်နေကြတဲ့လူတွေကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော် ပြုံးမိတယ်။ တစ်ခါတလေ လွှတ်ချပစ်လိုက်ရတယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက ပြောပါတယ်။ အခုထက် အသက်ပိုရလာရင် ဒါမျိုးလွှတ်ချဖို့ မလွယ်တော့ဘူးတဲ့။ သူပြောတာလည်း မှန်ပါတယ်။ မရှိနွမ်းပါးတဲ့ လူတွေအဖို့ စိတ်ကို လွှတ်ချရမယ့်နေရာကလည်း ဒီလိုပွဲတော်တွေပဲ ရှိတာမဟုတ်လား။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် သူများအိတ်ထဲက ငွေစကြေးစကို ကိုယ့်အိတ်ထဲရောက်ဖို့ လုံးပမ်းရင်း စိတ်တွေ ထုံအနေခဲ့ရတဲ့ လူတွေအတွက် တစ်ခါတစ်ရံ ဘာကိုမှမစဉ်းစားဘဲ လွှတ်ချပစ်လိုက်ရတဲ့ အချိန်တွေ လိုအပ်မှာပါပဲ။ The Ants ရဲ့ မစဉ်းစားတဲ့သီချင်းကို သတိရမိတယ်။ “သိပ်ပြီး ဦးနှောက်မခြောက်နဲ့ ဘ၀က ခဏပါ၊ ပျော်သလိုပဲ သွား၊ ကြိုတွေးထားလို့ မရတဲ့ လောကကြီးမှာ ပူပန်နေဦးမလား၊ မစဉ်းစားတဲ့ သီချင်းနဲ့ ကကြ” ဒီလိုတွေးဆိုတော့လည်း အဓိပ္ပာယ်မဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆမိတဲ့ ပွဲတော်တွေရဲ့ အနှစ်သာရကို သတိပြုမိတယ်။
တန်ခူးလရဲ့ ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ နိစ္စဓူဝ အလုပ်တွေ၊ အမောတွေနဲ့ နွမ်းနယ်နေတဲ့ လူတွေကို တခဏငြိမ်းအေးပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ခင်ရင်းနှီးဖို့ ကြိုးစားထားတဲ့ပွဲလို့လည်း ပြန်မြင်မိပြန်တယ်။ နှစ်တစ်နှစ်ကို ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးပြီး နောက်ထပ် နှစ်သစ်တစ်နှစ်ဆီ အေးချမ်းစွာ ကူးပြောင်းသွားစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အစဉ်အဆက်က လူကြီးတွေ ကြံဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နှစ်သစ်ဟာ ဆုတောင်းသံတွေနဲ့ စတင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုတဲ့ အလုပ်နဲ့ စီးဆင်းသွားရမယ့်ကိစ္စပဲ မဟုတ်လား။
မနက်ဖြန်ဟာ သေဆုံးတတ်တဲ့ သစ်ရွက်မဟုတ်ဘူး။ မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာလည်း ခန်းခြောက်သွားမယ့် မြစ်တစ်စင်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပွဲတော်နဲ့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို လွှတ်ချပြီးတဲ့နောက် လေးလံတဲ့ သောကတွေကို ပြန်လည်ကောက်ယူရမယ်ဆို လူ့အဖြစ်ဟာ ငြီးငွေ့စရာ မကောင်းဘူးလား။ တစ်ဖက်ပိတ် အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ အမည်းရောင်ကို အဖြူရောင်လို့ မြင်နေဖို့လည်း မလိုဘူးထင်တယ်။ တစ်ဖက်ပိတ် အဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ အဖြူကို အမည်းလို့ ဇွတ်ငြင်းနေဖို့လည်း မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုကို အငမ်းမရ စုပ်ယူနေကြတဲ့ လူတွေနဲ့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ကနေ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဖွင့်ကြည့်မိတော့ ဆီးရီးယားနဲ့ ပြည်တွင်းက စစ်ပွဲသတင်းတွေကို တွေ့ရတယ်။ အခုထိ ရှည်လျားထွားကြိုင်းနေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာ သင်္ကြန်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့ မွန်းကျပ်ခါးသီးတဲ့ စိတ်တွေကို ဘယ်လိုအရာတွေနဲ့ လွှတ်ချကြရှာလေမလဲ။ ကျည်ဆန်တွေကြားထဲမှာ ပွင့်နေတဲ့ အရာတွေက သေခြင်းတရားနဲ့ နာကျင်ငတ်မွတ်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းတွေပဲ သီးပွင့်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။ တစ်ပြည်တည်းနေပြီး တဘက်သတ် ပျော်ရွှင်နေမိတာကော ကျွန်တော်တို့ တရားမျှတရဲ့လားလို့ တစ်ယောက်တည်း တွေးမိတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှစ်သိမ့်စရာလည်း အဖြေမရှိ။ သူတစ်ပါးကို နှစ်သိမ့်ဖို့လည်း စကားလုံးမရှိ။ ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ ဘက်လိုက်မှုတွေ အပြည့်အ၀ပဲလို့ အဆိုးမြင်စိတ်က ခေါင်းထောင်လာပြန်တော့ ဆရာတက်တိုး ဘာသာပြန်တဲ့ ‘သူတို့ အတွေးအခေါ် မှတ်စုများ’ ထဲ ဖတ်ဖူးတဲ့ ဂစ်စတန်းရဲ့ စကားကို သတိရမိတယ်။
“အကောင်းမြင်သမားရော၊ အဆိုးမြင်သမားတို့ပါ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးပြု၏။ အကောင်းမြင်သမားက လေယာဉ်ကို တီထွင်သည်။ အဆိုးမြင်သမားက လေထီးကို တီထွင်သည်” တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ လေယာဉ်ပျံကို မတီထွင်နိုင်သူတွေဟာ လေထီးကို တီထွင်ဖို့ မမေ့လျော့သင့်ဘူး မဟုတ်ပါလား။
Posted in FeaturesTagged နှစ်ကူးအတွေးLeaveaComment on နှစ်ကူးအတွေး
Posted on April 21, 2018 April 21, 2018 by Eleven Media Group
Photoးbrittanymyersart
ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေပြောရင် နားမလည်နိုင်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ စာတွေမကျက်ချင်၊ စာမေးပွဲမဖြေချင်၊ လူကြီးတွေချုပ်ချယ်တာ မခံချင်တော့တဲ့အခါ ပြောကြတယ်၊ လူကြီးဖြစ်ချင်တယ်၊ လူကြီးဖြစ်ရင် ပျော်စရာကောင်းမှာပဲဆိုတော့ သူတို့က ပြန်ပြောတယ်၊ ကလေးဘ၀က အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။
အဲဒီတုန်းက နားမလည်ခဲ့ပေမယ့် အသက်ကြီးလာလေလေ နားလည်လာလေလေပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အကြီးကြီး ထင်ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဒုက္ခတွေဟာ ခုကြုံနေရတာတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။ ကျောင်းမှာ ဖြေခဲ့ရတဲ့စာမေးပွဲတွေထက် ဘ၀စာမေးပွဲတွေမှာ အောင်မြင်ဖို့က လိုအပ်ချက်တွေ ပိုများလာတယ်။ အဲဒီတုန်းက စည်းကမ်းကြီးတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကို တုန်နေအောင် ကြောက်ခဲ့ရတာတွေက အပြုံးချိုချိုလေးတွေသုံးပြီး နောက်ကျောဓားနဲ့ ထိုးတတ်သူတွေနဲ့ ယှဉ်တဲ့အခါ ဘာမှ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဖြူဖြူစင်စင် ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နေရာမှာ ‘စိတ်မကောင်းလိုက်တာ’ ဆိုတဲ့ စကားကို တွင်တွင်သုံးပြီး ကိုယ်ပျက်စီးရှုံးနိမ့်တာကို ကြိတ်ဝမ်းသာနေတဲ့သူတွေ အစားထိုးဝင်ရောက်လာတယ်။ ကျောင်းမထုတ်ခံရဖို့ဆိုတာ စည်းကမ်းကြီးကြီးမားမား မဖောက်ဖျက်ရင် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အလုပ်မထုတ်ခံရဖို့ကတော့ အချိန်ပြည့် ကြိုးစားနေရသလို ဘာမှမမှားဘဲနဲ့လည်း ၀န်ထမ်းလျှော့တဲ့အထဲ နေရင်းထိုင်ရင်းပါသွားနိုင်တယ်။
ချစ်ရခင်ရသူတွေနဲ့ ခွဲခွာရတာတွေ များလာတယ်။ ပြိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ များလာတာ နဲ့အမျှ ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်ဆိုတာတွေ ကျိုးပျက်လာတယ်။ ငယ်ငယ်က မိဘကလိုသမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပေမယ့် ကြီးလာတော့ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ဟာ တစ်ထပ်တည်း အမြဲမကျနိုင်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ တွေဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာ မဖြစ်ချင်တာတွေကိုလည်း လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားလာရတယ်။ ဒါကိုပဲ ရင့်ကျက်ခြင်းလို့ ခေါ်တယ်။ ဘ၀တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်လည်း ဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထား သလိုပါပဲ၊ ဘ၀ဆိုတာ ဒုက္ခတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာပါ။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ၊ ဒုက္ခကင်းတဲ့ ဘ၀ဆိုတာ ဘယ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားအားထုတ်ဖို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပေမယ့် ဘ၀တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ ဒုက္ခဆိုတာ ပါလာမယ်၊ ဒါကို ရှောင်လွှဲလို့ မရဘဲ အရှိ အရှိအတိုင်း လက်ခံနိုင်ဖို့ လိုတယ်ဆို တာလေးပြောချင်တာပါ။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ်နဲ့ ကတောက်ကဆ ဖြစ်နေချိန် ကိုယ့်မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်၊ ကိုယ်ချစ်ရသူ တစ်ယောက်ယောက် ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားတာမျိုး၊ သိပ်ကို အောင်ချင်လို့ တအားကြိုးစားဖြေဆိုထားတဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခု ကျသွားတာမျိုး၊ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ရှုံးသွားတာမျိုး၊ ကိုယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့သူ တစ်ယောက်ဆီက အကြောင်းမဲ့ လမ်းခွဲစကား ပြောတာခံလိုက်ရတာမျိုး၊ ကိုယ်အင်မတန်ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ရဲ့ လိမ်ညာတာကို သိလိုက်ရတာမျိုး၊ အဓမ္မပြုကျင့်တာလို၊ အရှက်ခွဲခံရတာ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရတာလို အင်မတန် ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုနဲ့ ကြုံခဲ့ရတာမျိုး စသဖြင့် ရှိပါသလား။ အဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ၊ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကြောင့် အရာရာ ပြိုလဲသွားတာမျိုးးရော ဖြစ်ဖူးပါသလား။
တကယ်တော့ ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကို ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာက ဒါတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတာပါပဲ။
စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Martin Seligman က ပြောတယ်။ အဲဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးကနေ ပြန်လာနိုင်ဖို့ လူတစ်ယောက်ကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့ အရာသုံးခု (3 P) ရှိပါတယ်တဲ့။
၁။ Personalization – ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်၊ ကိုယ်အသုံးမကျလို့ ဒီလိုဖြစ်တာလို့ ခံယူတတ်ကြတယ်။
၂။ Pervasiveness – ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးမှာလည်း ဒါကြီးက သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ မှတ်တတ်ကြတယ်။
၃။ Permanence – ဒီကိစ္စကြီးက အမြဲတည်တံ့နေတော့မယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။
ဥပမာဆိုပါတော့ ကိုယ်မျှော်လင့်ချက် အပြည့်နဲ့ တအားကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခု ကျသွားပြီး နောက်တစ်ယောက်က ကိုယ့်အစား ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတယ်။ အဲဒါက ကိုယ်အသုံးမကျလို့ ဖြစ်တာလို့တွေးတယ် (Personalization) ။ ငါဟာ ဘယ်နေရာမှာမှလည်း အောင်မြင်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးတယ်။ ကျန်တဲ့ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာပါ အဆင်မပြေဖြစ်လာတယ် (Prevasiveness) ။ နောက်ထပ်လည်း ကြိုးစားချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။ ငါဟာ အမြဲရှုံးနိမ့်နေတော့မှာ လို့တွေးတယ် (Permanence) ။
Facebook ရဲ့ Sheryl Sandberg က သူ့ရဲ့ Option B ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ရေးဖူးတယ်။ သူ့အမျိုးသားက ပြေးစက်ပေါ်မှာပြေးနေရင်း ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားတယ်။ အဲဒီအဖြစ်ဆိုးကြီး ကြုံပြီးနောက်မှာရုန်းကန်ထပြီး ပုံမှန်အနေအထား ပြန်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် သူလည်းဒီ3P ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ သူဘယ်လိုထင်သလဲဆိုတော့ ငါဂရုမစိုက်လိုက်လို့ ယောက်ျားးဖြစ်သူ ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့။ ပြေးစက်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျပြီး ခေါင်းထိသွား တယ်ထင်လို့ ငါသာ စောစောရောက်လိုက်ရင် သူ့အသက် မီနိုင်တယ်လို့ တွေးတယ်။ သူ့အမျိုးသား ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အဆင်မပြေတော့ဘူး။ သူရော သူ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀တွေအကုန် ဒုက္ခရောက်ပြီလို့ ထင်နေမိခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ဒီစိတ်ဒဏ်ရာ၊ ဒီအရိပ်ဆိုးကြီးက သူတို့ ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုမှာ ရှိနေတော့မှာလို့ တွေးတယ်။
နောက်မှ သူ့ယောက်ျားဟာ နှလုံးသွေးကြောပြဿနာကြောင့် သေဆုံးတာလို့ သိရတယ်။ သူ့အပြစ် ဘာမှမပါပါဘူးပေါ့။ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ သူတို့မိသားစုရဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေမှာလည်း နဂိုအတိုင်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရနိုင်တယ်လို့ မြင်လာတယ်။ ဒီအရိပ်ဆိုး၊ ဒီစိတ်ဒဏ်ရာတွေကနေ ရုန်းထွက်နိုင်တယ်လို့လည်း ယုံကြည်လာတယ်။ ဒါကြောင့် သူက သူ့အမျိုးသားဆုံးပါးသွားတဲ့ အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုကနေ ပြောပြသွားတယ်၊ အဲဒီ3P ကနေ မြန်မြန်ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့သူဟာ ရှုံးနိမ့်မှုတစ်ခု၊ အဖြစ်အပျက်ဆိုးတစ်ခု ကြုံပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မြန်ပြန်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
အဓိကကတော့ အတွေးတွေကိုပြောင်းဖို့ပေါ့။ တချို့ကိစ္စတွေဟာ ကိုယ့်အမှားကြောင့် ဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် အခါခပ်သိမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ အင်တာဗျူးမှာ လူရွေးတော့ ကိုယ်က တော်ပါလျက်နဲ့ အချင်းချင်းရင်းနှီးသူကို ရွေးလိုက်တာမျိုး ရှိတတ်တယ်။ နေရင်း ထိုင်ရင်း သွားရင်း လာရင်းနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်တာ၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်ခံလိုက်ရတာမျိုး ရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ်စိတ်အခန့် မသင့်လို့ စကားမာမာ ပြောမိလိုက်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တစ်ယောက် ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ အဲဒါမျိုးဆိုလည်း ကိုယ်ပြောလို့ ဖြစ်တာမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ကို ဒီလိုလေး မပြောခဲ့သင့်ဘူးဆိုပြီး နောင်တရနေတတ်တာပဲ။ အဲဒီလို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုအတွက် ငါ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ဖျောက်ပစ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။
နောက်တစ်ခု၊ ဒီတစ်နေရာမှာ ရှုံးနိမ့်သွားတိုင်း၊ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ဆိုးတွေ ကြုံလိုက်ရတိုင်း ဘ၀တစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သတ်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ယောက်ျားကဆိုးလို့ အိမ်ထောင်ကွဲသွားတာနဲ့ပဲ အရာအားလုံး ပြိုလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ အသည်းကွဲလို့၊ အဖေအမေဆုံးသွားလို့၊ အလုပ်ပြုတ်သွားလို့ ငါ့ဘ၀တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားပြီတွေးစရာ မလိုပါဘူး။ ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ သတ်သတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဟာနဲ့သူ ဖြစ်တည်နေပါတယ်။ ဒါကို ခွဲခြားပြီးတော့ မြင်ကြည့်ပေးပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ အမြဲအရိပ်လို လိုက်နေမှာဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးပါ။ ဒီတစ်ခါ ရှုံးနိမ့်သွားတာဟာ ဒီတစ်ခါပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အားထုတ်မှုမှန်သမျှ ရှုံးနိမ့်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ၀မ်းနည်းစရာတွေနဲ့ အဆုံးသတ်သွားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဟာ ဒီတစ်ပုဒ်စာပါပဲ။ ထပ်ပြီး ဖြစ်လာမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းတိုင်းဟာ ဒီလိုပြီးဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မအောင်မြင်လို့၊ အရှုံးပေါ်လို့ လုပ်ငန်းတစ်ခု ရပ်လိုက်ရခြင်းဟာ ထပ်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းမှန်သမျှ ရှုံးနေမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ တွေ့ရများလာတဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကျူးလွန်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကို ဒါလေး သိစေချင်တယ်။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးနဲ့ ကြုံလိုက်ရတာ ကိုယ့်အပြစ် လုံးဝမဟုတ်သလို ဒီလိုကြုံလိုက်လို့လည်း ကိုယ့်ဘ၀တစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သွားပြီမထင်ပါနဲ့။ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေချာစနစ်တကျ တည်ဆောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘ၀ရဲ့ ကျန်အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ သူ့ဟာနဲ့သူပဲ ရှိနေတာပါ။ အဲဒီလိုပဲ၊ ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးက ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့တန်ဖိုးကို အဆုံးအဖြတ် မပေးနိုင်ပြန်ပါဘူး။ ကိုယ်ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လောကအလယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရှုံးတွေကို လက်ခံနိုင်ပုံချင်းမတူကြသလို၊ ကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ ဆိုးရွားမှုချင်းကလည်း မတူကြပါဘူး။ တကယ်လို့များ ကိုယ်ဟာ အရှုံးတွေ၊ စိတ်ဒုက္ခတွေကို သိပ်ပြီးလက်မခံနိုင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ဘ၀မှာ သိပ်ကိုမှ ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ခုပြောခဲ့တဲ့3P ကို သိထားဖို့နဲ့ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ကျွန်တော်တို့မှာ အကြွေစေ့လေးတွေ ရလာပါတယ်။ ဆုံတွေ့ခြင်းဟာ ‘ခေါင်း’ ဆိုရင် ခွဲခွာခြင်းဟာ ‘ပန်း’ ပါ။ အောင်မြင်ခြင်းဟာ ‘ခေါင်း’ ဆိုရင်လည်း ရှုံးနိမ့်ခြင်းဟာ ‘ပန်း’ ပါ။ ပျော်ရွှင်ခြင်းက ‘ခေါင်း’ ဆိုရင်တော့ ၀မ်းနည်းခြင်းက ‘ပန်း’ ပါ။ သုခတွေက ‘ခေါင်း’ ဆို ဒုက္ခတွေက ‘ပန်း’ ပေါ့။ ‘ခေါင်း’ တွေပဲ လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီး တောင်းဆိုနေလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာကတော့ ‘ခေါင်း’ ကျတဲ့အခါ ပျော်နေတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ‘ပန်း’ ဘက်ခြမ်းမှာ ပါလာတဲ့ အဆိုးတရားတွေကို လက်ခံပြီး ရုန်းကန်ထနိုင်စွမ်းရှိလာအောင် ကြိုးစားဖို့ပါပဲ။
Posted in FeaturesTagged စိတ်ဒုက္ခဖြစ်စရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါLeaveaComment on စိတ်ဒုက္ခဖြစ်စရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ
ဆာဦးသွင် (၀ဲစွန်) ကို ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်က ကိုလံဘိုမြို့၌ ထိုစဉ်က ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု (ယာစွန်) နှင့်အတူ တွေ့ရစဉ် (Photo: dailynews)
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စိတ်စေတနာသဒ္ဓါ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ ဖြူပေးခဲ့သော ကောင်းမှု၏အကျိုးဆက်သည် နှစ်ရာပေါင်းများစွာ ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်ကြောင်း ပြယုဂ်တစ်ခုကို တွေ့မိပါ၏။
ထိုပြယုဂ်တစ်ခုမှာ မော်လမြိုင်အသင်း (ရန်ကုန်) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုချင်ပါ၏။
ထိုပြယုဂ် ဖြစ်တည်လာမှုအတွက် စိတ်စေတနာ သဒ္ဓါတရား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ ကောင်းမှုပြုပေးခဲ့သူကား ‘ဆာဦးသွင်’ ဖြစ်ပါသည်။
ဦးသွင်သည် ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့ အမြတ်တနိုးရှိသော ‘ဆာဘွဲ့’ ချီးမြှင့်ခံရသည်။ လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး ၁၉၅၀ ပြည့်တွင် ‘သတိုးသီရိသုဓမ္မဘွဲ့’ ချီးမြှင့်ခံရသည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပထမတန်းဘွဲ့တံဆိပ်နှင့် ရွှေစလွယ်ချီးမြှင့်သော ‘Order of the Crown’ ဘွဲ့ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဦးသွင်သည် ရန်ကုန်ကောလိပ်မှ အက်ဖ်အေအောင်ကာ ဘီအေတန်းကို တက်ရုံသာတက်ပြီး ပညာအုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်အကြာတွင် အလုပ်ထွက်ကာ ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကမ်း ခနောင်တိုတွင် ဆန်စက်ထောင်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများနှင့်တန်းတူ ယှဉ်ပြိုင်လုပ်ရင်း အောင်မြင်လာကာ ဆန်ကုန်သည်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆန်စက်ပိုင်၊ မြေယာ၊ တိုက်တာပိုင်အဖြစ် ကြွယ်ဝလာသည်။ မော်လမြိုင်မြို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကုမ္ပဏီ အုပ်ချုပ်မှုအစုရှင်၊ စည်ပင်သာယာအဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာအမျိုးသား အာမခံကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာပြည်ဘိလပ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အုပ်ချုပ်ရေးဒါရိုက်တာ၊ ရန်ကုန်ရေ၀န်ရုံး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်၊ ‘သူရိယသတင်းစာတိုက်’၏ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာအဖြစ် သူ့ဘ၀တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၃၇ တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရီဇတ်ဘဏ် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ်လည်း ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုနှစ်မှာပင် ဂျော့ဘုရင်နန်းတက်ပွဲသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ် တက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ မှ ၁၉၄၁ အထိ အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။ ဦးသွင်သည် ရွှေတိဂုံစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး မဟာဗောဓိအသင်းကြီး၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဂျပန်ခေတ်တွင် အစိုးရ၏ ပရီဗီကောင်စီတွင် သဘာပတိ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတက နာယကအဖြစ် ဆောင်ရွက်သော ဗုဒ္ဓသာသနာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစသည်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
ဦးသွင်သည် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ငန်းကြီးများ ဆောင်ရွက်သယ်ပိုးရင်း သဒ္ဓါထက်သန်စွာ လှူဒါန်းမှုများမှာလည်း အမြောက်အမြားပင်ဖြစ်သည်။ ဆန်စက်ငှားခ၊ အိမ်လခတို့မှအစ တန်ဖိုးများပြားလှသည့် တိုက်တာအိမ်ရာခြံမြေ လယ်ယာတို့နှင့် စိန်ရွှေရတနာတို့ကို လှူဒါန်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကျိုက်သလ္လံစေတီတော် ငှက်မြတ်နားကို ပြင်ဆင်ရွှေချခြင်း၊ အထွတ်တင်သည့် စိန်ဖူးတော်ကိုလှူခြင်း၊ မော်လမြိုင် ရှမ်းကန်ုရပ်တွင် ရွှေချက်သိုစေတီတည်ခြင်း၊ ယခုအခါကုက္ကိုင်း၊ ဟာမစ်တစ်သာသနာ့ရိပ်သာဟု ထင်ရှားသည့် ရိပ်သာကြီးဖြစ်တည်လာရန်အတွက် ထိုခေတ်ကာလခန့်မှန်းငွေကျပ် ၁၉ သိန်းခန့်တန်သော မြေဧက ၁၉ ဧကနှင့် ထိုမြေအတွင်း ၅ ဒသမ ၄၈၈ ဧကအကျယ်တွင် ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းလေးဆောင်၊ ဗုဒ္ဓကြေးဆင်းတုတော်တစ်ဆူနှင့် ပလ္လင်တကဲ၊ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ရုပ်ပွားတော်များ၊ ရေတွင်းရေကန် ပရိဘောဂများ၊ ထို့နောက် အမိအဖတို့၏အမည်များကို အဖျားဆွတ်တွဲလျက်မှည့်ခေါ်သော ‘ဖလ်ယဉ်ဓမ္မာရုံကြီး’ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမှုတို့မှာ သူ၏အထင်ကရဒါနများဖြစ်ကြသည်။
ဦးသွင်သည် သူ၏ဇာတိမြို့ မော်လမြိုင်အသင်းကို ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားလမ်းတွင် ရှေးယခင်ကရှိခဲ့သော ဒေါက်တာဒေးဆေးတိုက်၏ မြောက်ဘက်အနီးမှ သုံးထပ်တိုက်တွင် အသင်းတည်ရာပြုခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထိုစဉ်က ရန်ကုန်မြို့၌ မော်လမြိုင် မြို့သူမြို့သား လေးသောင်းကျော်ခန့်ရှိရာ စည်လုံးညီညွတ်မှုဖြင့် တွေ့ကြဆုံကြ အချင်းချင်း ကူညီစောင့်ရှောက်မှုပြုကြရန်ဖြစ်သည်။
မော်လမြိုင်အသင်းသည် ရန်ကုန်၌ အစောဆုံးပထမဦးစွာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် အသင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အသင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ပွဲကိုလည်း ပင့်သံဃာတော်များအား ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းမှုဖြင့်ဖွင့်ကာ ပရိသတ်တို့ကိုလည်း ကျွေးမွေးဧည့်ခံသည်။ ထိုတိုက်ခန်းတွင် လူမဆံ့သဖြင့် တိုက်ရှေ့မြေပြင်တွင် ပရိသတ်က အပြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အငြိမ့်ပွဲပါခံခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှုမှာ ဧည့်သည်တို့က ‘၀လင်ပါပြီ။ တော်ပါပြီ’ ဟုပြောဆိုခဲ့ရသည်အထိဟု ဆိုရာ မော်လမြိုင်က အစားဟု စကားရှိသော်လည်း ထိုအစားသမားတို့ပင် လက်မြှောက်ရအောင် ကျွေးမွေးမှုသဒ္ဓါကို မည်မျှလောက်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ပေပြီ။ စည်ကားသိုက်မြိုက်မှုကိုလည်း မြင်ယောင်မှန်းနိုင်ပေပြီ။
ထို့နောက်နှစ်များ မကြာမြင့်မီ သုံးနှစ်ခန့်အကြာ အခက်အခဲအချို့ကြုံတွေ့ရပြီး အသင်းကို ရွှေတိဂုံစေတီတော် တောင်ဘက်စောင်းတန်းမှ ဇရပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းဇရပ်သည်လည်း အရင်းခံအားဖြင့် ဦးသွင်၏ စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းမှုပင်ဖြစ်သည်။ ဇရပ်ဒကာကြီးတစ်ဦးထံမှ သူရရှိခဲ့သောမြေကွက်တွင် အသင်းပိုင်ဇရပ်တည်ဆောက်ရသော် အသင်းသားများသည် အသင်းဇရပ်သို့ လာရင်းဘုရားဖူးနိုင်ခြင်း၊ တရားပွဲနှင့်အတူ အလှူအတန်းများပြုနိုင်ခြင်း၊ ဥပုသ်သီတင်း သီလဆောက်တည်နိုင်ခြင်း၊ မြို့သားများလည်း တည်းခိုနိုင်ခြင်းတို့ဖြင့် အဆင်သင့်လှမည်ဖြစ်၍ ဇရပ်တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ပြီး ရွှေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အနေဖြင့် အစအဆုံး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမှုပြုနိုင်သော်လည်း အသင်းသားတို့၏ဒါနများလည်း ပါဝင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ သူက ငွေကျပ်တစ်သောင်းငါးထောင် ခေတ္တစိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အသင်းအတွက် ဇရပ်တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အထမြောက်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ဖခင်ဘက်မှ အဘိုးအဘွားတို့နှင့်အတူ ကျွန်တော်ရောက်ဖူးခဲ့ရသော ဇရပ်ဖြစ်လေသည်။ ထိုဇရပ်သည် တိုင်းပြည်၏ မျိုးချစ်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံစည်းဝေးတိုင်ပင်ခဲ့ဖူးရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ‘သမိုင်းဝင်ဇရပ်’ ဟုဆိုရပေမည်။ နှစ်ကာလများစွာ ဇရပ်သည် ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းများအတွက် အကျိုးပြုခဲ့သည်။
သို့သော် လောက၌ ကြုံရလေ့ဓမ္မတာအတိုင်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော် ဘက်စုံပြုပြင်မွမ်းမံ တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ မော်လမြိုင်အသင်းဇရပ်သည်လည်း ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ မဟာအောင်မြေဘုံစံ စာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော်ကြီးက အသုံးပြုခွင့်ပေးတော်မူသဖြင့် မော်လမြိုင်အသင်းသည် အုတ်တိုက်ဇရပ်ဟောင်းတစ်ဆောင်တွင် ခိုလှုံရပ်တည်ခဲ့ရသည်။ အသင်းသက်တမ်း (၇၇) နှစ်၌ ယာယီရွေ့လျောသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
မူလပကတူး စေတနာသဒ္ဓါထူးသည့် အလှူရှင်ဆာဦးသွင်က စတင်တည်ထောင်ပေးမှုဖြင့် အသင်းသည် ၁၉၁၈ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ဖြစ်တည်လာခဲ့သည်။
ယခုခရစ်နှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တိုင်သောအခါ မော်လမြိုင်အသင်း (ရန်ကုန်)သည် သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်တစ်ရာတင်းတင်းပြည့် မြောက်လာခဲ့ပေပြီ။
သို့ဖြစ်၍ နှစ်တစ်ရာပြည့် အခမ်းအနားကို ဧပြီ ၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ခင်းက စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ကျင်းပရာနေရာကား ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီး ဧပြီ ၅ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ အနောက်ဘက်မုခ်၊ အောက်ပစ္စယာအုတ်လမ်းရှိ ‘မော်လမြိုင်ဓမ္မာရုံသစ်’ တွင် ဖြစ်လေသည်။
ထိုနေ့နံနက်ခင်းက ကျင်းပသောအခမ်းအနားသို့ မော်လမြိုင်မြို့ ဇာတိသားတစ်ဦးပင်ဖြစ်သော ကျွန်တော်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး၏ ပရိဝုဏ်ဝတ္တကမြေ အနောက်ဘက် အောက်ပစ္စယာသည်ဓမ္မာရုံ၊ ဇရပ်၊ သစ်ပင်ပန်းမန်တို့နှင့် စိမ်းစိုအေးချမ်းကာသာယာလှသည်။ မော်လမြိုင်အသင်းဓမ္မာရုံခြံဝသို့ ရောက်တော့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကမ်းကာ နွေးထွေးစွာ ဆီးကြိုကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်မှ အသင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သော ကျွန်တော်အဖို့ ကိုယ်ကသိရှိသူနည်းလှသလို၊ ကိုယ့်ကိုသိသူလည်း နည်းပါးလှသည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ ဓမ္မာရုံခန်းမအတွင်း ၀င်ခဲ့သော ကျွန်တော်သည် စိတ်လက်ပေါ့ပါး ပျော်ရွှင်ဆုံမိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သိသော ဦးစိုးမြိုင် (လေ) သည် ခန်းမအတွင်း ဓာတ်ပုံတဖျပ်ဖျပ် လှည့်ပတ်ရိုက်နေသည်။ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လေးမြင့် (မလေး-ပညာရေး) က လူကြားထဲ တိုးဝှေ့လာကာ နှုတ်ဆက်ပါသည်။ အတန်ငယ်နောက်ကျပြီးမှ ခန်းမတွင်းဝင်လာသော ဆရာညို (ဒေါက်တာခင်မောင်ညို) ကို လှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်။ နှုတ်မဆက်သာပါ။
ခန်းမအတွင်းဝယ် စန္ဒရားအောင်ဝင်းနှင့် အဖွဲ့၏တေးသံသာများက စီစီလှိုင်လှိုင် ချိုမြိန်စွာပျံ့လွင့်နေသည်။
ပရိုဂျက်တာဖြင့် ထိုးပြနေသဖြင့် ပိတ်ကားပေါ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့၏ ရှုခင်းနှင့် အထင်ကရ အဆောက်အအုံဓာတ်ပုံများကို ငေးမောကြည့်ရှုရတော့ ကိုယ့်ကိုဖွားမြင်ခဲ့ရာ ဇာတိမြို့၏ အငွေ့အသက်များကို ခံစားရသည်။ မော်လမြိုင်သည် မွန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့၊ အင်္ဂလိပ်တို့ကလည်း သဘောကျနှစ်ခြိုက်လှစွာ အစောဆုံးခြေချခဲ့ရာဖြစ်ခဲ့သည်။
သမိုင်းဝင်ပြီး တန်ခိုးကြီးဆုတောင်းပြည့်ဝကြလေသည့် ဘုရားပုထိုးစေတီကျောင်းကန်ဇရပ်တို့ ပေါများလှသည်။ ဘုံပြတ်(ခေါ်)မြင်းလှည်းကို မျက်စေ့ထဲ မြင်ယောင်သေးတော့သည်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ကမ်းရာတွင် တီရှပ်၊ သီချင်းခွေ၊ ထီလက်မှတ်တစ်စောင်၊ Key Chain၊ ထီးတစ်ချောင်း စသည်တို့အပြင် အထိမ်းအမှတ်မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်လည်း ပါပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ကံစမ်းမဲများဖောက်ပြီး ပစ္စည်းများချီးမြှင့်တော့ ကျွန်တော်သည် အိမ်မှာရှိသော တီဗွီကအိုပြီမို့ မဲပေါက်ချင်လှသည်။ ဆုများတောင်းနေခဲ့သည်။ အသင်းလူကြီးများက အလှည့်ကျမဲနှိုက်ယူပြီး ဖွင့်ဖောက်တော့ တစ်ခုသော တီဗွီပေါက်မဲမှာ (၀၉၅)။ အားပါးပါး။ ကျွန်တော်ရသော ကံစမ်းမဲနံပါတ်မှာ (၀၉၆) ဖြစ်လေသည်။ သားလတ်ဖြစ်သူ ပီပီကြားလပ်ခဲ့လေသလားပါပဲ။ သို့သော် ပျော်ခဲ့ရပါသည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထိုနေ့က ကျွန်တော်နေရာယူခဲ့သော စားပွဲတွင် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က နေထိုင်ကျောင်းနေခဲ့ဖူးရာ မော်လမြိုင်မြို့ ရွှေတောင်ရပ်မှ သားအမိတို့နှင့်အတူ ထိုင်ခဲ့ရပြီး အလွန်ကြိုက်လှသော သင်္ကြန်ထမင်းကို စားခဲ့ရပါလေသည်။
မော်ရွှေမြိုင်အသင်းသည် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု နှစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ကို နှစ်တစ်ရာပြည့် ပွဲသဘင်ဖြင့် ကြိုဆိုလိုက်ပြီး နှစ်သစ်ဆန်းမှစကာ နှစ်ရာကျော်ခရီးကို ဆက်ရပါတော့မည်။ အတိတ်ကို ပြန်စောင်းကြည့်ကြပါလျှင် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှု ပွဲသဘင်များကို တွေ့ကြရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အခက်အခဲအကျပ်အတည်း ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု ရင်းနှီးရသည်များကိုလည်း ပြန်လည်သိနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အထက်တွင်ဆိုခဲ့သလို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ စေတနာသဒ္ဓါထက်သန် ဖြူစင်စွာ အစပြုပေးခဲ့သော ကောင်းမှု၏အကျိုးဆက်သည် နှစ်ရာပေါင်းများစွာ ရှင်သန်တည်တံ့လေမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည် ဆိုစကားအတွက် ပြယုဂ်ဖြစ်လေပြီ။
ပထမဦးဆုံးဥက္ကဋ္ဌကြီး သတိုးသီရိသုဓမ္မဆာဦးသွင်မှသည် မျက်မှောက်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းဦးသို့တိုင် ဥက္ကဋ္ဌအဆက်ဆက်နှင့် အမှုဆောင်လူကြီးများနှင့် အသင်းသားတို့သည် နမူနာကောင်းနှင့် ခရီးကောင်းကို ဆက်နှင်ကြလိမ့်မည်။ မြို့သူမြို့သားများက အားပေးပါဝင်ကြရလိမ့်မည်။ အစဉ်အလာကောင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း သယ်ဆောင်ကြရပါလိမ့်မည်။
မော်လမြိုင်မြို့ ဒိုင်းဝန်ကွင်းရပ်၊ ရှမ်းကုန်းနေ ကုန်သည်ဒါယကာကြီးဦးဖလ်၊ ကျောင်းဒါယိကာမကြီး ဒေါ်ယဉ်တို့မှ ဖွားသန့်စင်လျက် အောင်မြင်ထင်ရှားခဲ့သော ‘မြန်မာလူကျော်’ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆာဦးသွင်သည် ယခုမြန်မာနှစ်သစ်ဆန်းကာလဆိုလျှင် အသက် နှစ် ၁၄၀ မွေးနေ့ကို ကြုံမည်ဖြစ်လေသည်။
Posted in FeaturesLeaveaComment on စံမလျှော့လေနှင့် မော်ရွှေမြိုင်
Posted on April 21, 2018 by Eleven Media Group
အမှန်တကယ် တပ်ချင်သည့်ခေါင်းစဉ်က ‘ရေအိမ်တံခါး’ မဟုတ်ပါ။ ‘အိမ်သာတံခါး’ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ‘အိမ်သာ’ ဟုသုံးရမည်ကို စာဖတ်သူကို အားနာလှသောကြောင့် ‘ရေအိမ်’ ဟု အစားထိုးပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နံနက်ခင်း စောစောစီးစီး သတင်းစာဖတ်မိသူများအဖို့ ‘အိမ်သာ’ ဟူသောအသုံးအနှုန်းက မသတီရွံရှာဖွယ် ဖြစ်သွားစေနိုင်ကြောင်း တွေးမိသွားသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်ပြောချင်သည့် အကြောင်းအရာကတော့ ရွံစရာမဟုတ်ပါ။ တွေးတောချင်စရာမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း စာဖတ်သူကို ရိုသေလေးစားသောအားဖြင့် ဤနေရာမှစတင်ကာ ‘ရေအိမ်’ ဟုပင်သုံးစွဲကာ ရေးသားချင်ပါသည်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်ရေးချင်သည်မှာ ‘ရေအိမ်’ အကြောင်းမဟုတ်။ ‘ရေအိမ်တံခါး’ အကြောင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူသူငါငါ နေ့စဉ်မြင်ဖူးနေကျ မထူးဆန်းလှသော ရေအိမ်တံခါးတစ်ချပ် အကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ရေအိမ်တစ်လုံးရှိပါသည်။ ထိုရေအိမ်မှာ တံခါးတစ်ချပ် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ အဆိုပါ ရေအိမ်သို့တက်ပြီးတိုင်း ရေအိမ်တံခါးကို ၀ုန်းခနဲအသံမြည်အောင် ပိတ်သူများမှာ အဘိုး၊ အမေနှင့် အစ်ကိုကြီးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ရေအိမ်တံခါးပိတ်တိုင်း ထိုကဲ့သို့ ဘယ်တော့မျှပိတ်လေ့မရှိချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ ရေအိမ်တံခါး၏အခြေအနေမှာ တော်တော်လေးဆိုးရွားနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ သူ့ဘာသာ ဤအတိုင်းနေပုံကိုက ယိုင်တိယိုင်ရွဲ့နှင့် ခပ်ယဲ့ယဲ့ လူမမာတစ်ယောက်သဖွယ်ဖြစ်နေသော ရေအိမ်တံခါးခမျာ လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ၀ုန်းခနဲမြည်အောင် အတွန်းခံရမည်ဆိုလျှင် မည်သို့သောအခြေအနေသို့ ရောက်သွားနိုင်မလဲဆိုသည်မှာ တွေးပင်မတွေးဝံ့သော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ထိုကဲ့သို့ ၀ုန်းခနဲမြည်အောင် အတွန်းခံရသည့်အခါတိုင်း (ကျွန်တော့်အခန်းက ရေအိမ်နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိသောကြောင့် ကြားသိမြင်တွေ့နေရပါသည်) ရေအိမ်ဘက်မှနေ၍ အယူခံဝင်သည့် သဘောစိတ်ထဲမှ တိုးတိုးလေးရေရွတ်ကာ ‘ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြည်းဖြည်းလေး ပိတ်ပေးပါလား’ ဟု တိုးလျှိုးတောင်းပန်နေမိတတ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အတွေးထဲမှာ ယိုင်တိယိုင်ထိုးနှင့် လျှောက်လာသည့် လူတစ်ယောက်ကို ဆောင့်တွန်းလိုက်သည့်သဖွယ် ထင်မြင်ကာ ရေအိမ်တံခါးကိုယ်စား နာကျင်သွားမိပါသည်။ ‘ဘာလို့များ ရေအိမ်တံခါးအပေါ် မစာမနာပြုမူရက်ကြတာလဲ’ ဟု တစ်ကိုယ်တည်း မကျေမနပ်တွေးကာ မေးနေမိပါသည်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရေအိမ်တံခါး၏ သက်တမ်းမှာ မနည်းလှတော့။ ကျွန်တော့်အထင် ၁၅ နှစ်ဝန်းကျင် ရှိလောက်ပေလိမ့်မည်။ တာလပတ်စကို နှစ်ခေါက်ခေါက်ပြီး ပတ်ပတ်လည် သစ်သားပြားပါးပါးလေးများဖြင့် ဘောင်ခွေကာ ပတ္တာနှစ်ခုတပ်ထားသော ရေအိမ်တံခါးတစ်ချပ်ကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သူစဖြစ်တည်လာကတည်းက မိုးဒဏ်၊ လေဒဏ်၊ လူဒဏ် အထွေထွေဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော သူ့လောကဓံက သူ့ဘ၀အမှန်ကို ပြောပြနေပါသည်။ သည်ကြားထဲ ခဏခဏချူချာလှသောသူ့ကို ကျွန်တော်တို့အိမ်သားများက မကြာခဏ ကုစားပေးရသောအခါ ယိုယွင်းပြိုဆင်းလာရသော သူ၏ရုပ်ရည်ရူပကာယမှာ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ဖြောင့်ဖြောင့်ဆင်းဆင်း မဟုတ်တော့ချေ။ မိုးဒဏ်ကာလဒဏ်ကြောင့် ဆွေးရိလာသောသစ်ပြားများက သံရိုက်သည့်ဒဏ်ကိုပင် မခံနိုင်တော့။ ထိုအခါ သံနေရာမှာ သွပ်ကြိုး (၀ါ) ပလတ်စတစ်ကြိုးကို အစားထိုးရတော့သည်။ ဟိုနေရာက သွပ်ကြိုးချည်၊ ဒီနေရာက ပလတ်စတစ်ကြိုးချည်နှင့် ပုံလျက်သား လဲကျမသွားအောင် ကြိုးအထပ်ထပ်နှင့် တုပ်နှောင်ခံလိုက်ရသောအခါ သူ၏ပင်ကိုရုပ်ပင် မပီပြင်ချင်လှတော့။ သူ့ပုံပန်းက ပတ်တီးအထပ်ထပ် စည်းထားသော လူမမာတစ်ယောက် မတ်တတ်ရပ်နေသည့်သဖွယ်၊ ချိုင်းထောက်နှစ်ခု အားပြုကာ လမ်းလျှောက်လာသည့် ဒုက္ခိတတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရသကဲ့သို့။ ကျွန်တော် ထိုကဲ့သို့ပင် မြင်ယောင်နေမိပါသည်။ သူ့ကိုယ်စား နာကျင်ခံစားနေမိပါသည်။ သူ့အတွက် ရင်ထုမနာ ဖြစ်နေမိပါသည်။ တကယ်တော့ သူသည် သက်မဲ့တံခါးတစ်ချပ်သာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က ထောင့်မှန်စတုဂံပုံအဖြစ် မွေးဖွားလာခဲ့သောသူသည် ယခုအခါ စတုရန်းမက တြိဂံလည်းမကျ ယိုင်တိယိုင်တ ရွဲ့တိရွဲ့စောင်း ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားသည်ဟု ဆိုရပေတော့မည်။ ဤသည်ပင် လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့နှင့် လက်ပွန်းတတီး ဆက်ဆံနေရသော ရေအိမ်တံခါးတစ်ချပ်၏ ရုပ်ပုံလွှာဖြစ်ပါသည်။
ပြောရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် တခြားတံခါးများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ပိုသလောက် ရေအိမ်တံခါးအပေါ်မှာတော့ စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းသယောင်ရှိပါသည်။ ဒါကလည်း သဘာဝကျပါသည်။ ‘ရေအိမ်’ ဟူသော အသံကြားလျှင် လူအများစုက နှာခေါင်းရှုံ့ကြစမြဲ မဟုတ်လား။ ‘ရေအိမ်’ သည် ရွံ့စရာ၊ မသတီစရာ၊ အညစ်အကြေးစွန့်ရာ အရပ်ဌာနတစ်ခုဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ တတ်နိုင်လျှင် ရေအိမ်ထဲ မြန်မြန်ဝင်ပြီး မြန်မြန်ထွက်ချင်သည်။ မလွှဲမကင်းသာသောကြောင့်သာ ဆက်ဆံနေရသည့် သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးသည်နှင့် ခပ်ဝေးဝေးမှသာ နေချင်ပါသည်။ သူ့ကို မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ခပ်ကင်းကင်းနေ၍ရလျှင် နေလိုက်ချင်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့သည် သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးသည်နှင့် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ‘ကျီးထိုးထိုး ခွေးစားစား’ သဘောမျိုး သူ့ကို ကျောခိုင်းစွန့်ပစ်ချန်ထားရစ်ခဲ့ကြလေသည်။ မိမိတို့နောက်ကွယ်၌ သူဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်နေပါစေ။ ကိစ္စမရှိ။ စိတ်လည်းမ၀င်စား။ သနားလည်း မသနား။ စဉ်းလည်း မစဉ်းစား။ ဒင်းကို မလွှဲသာလို့ ဆက်ဆံနေရတာမှန်။ ဒင်းက နံလည်းနံ။ ညစ်လည်းညစ်ပတ်။ ကျက်သရေလည်းမရှိ။ အမင်္ဂလာအတိ။ ထွီ ရွံ့စရာကောင်းလိုက်ပါဘိ။ ကိစ္စမြန်မြန်ပြီးသည်နှင့် ဒင်းထံပါးမှ ဝေးရာသို့ ပြေး၍သာ နေလိုက်ချင်ပါတော့သည်ဆိုပြီး ကျေးဇူးကန်းကြပါတော့သည်။
တွေးကြည့်လျှင် ‘ရေအိမ်’ သည် ကျွန်တော်တို့၏ ကျေးဇူးရှင်အမှန်ပင်။ ‘ရေအိမ်’ က ကျေးဇူးရှင်ဆိုနေမှတော့ ‘ရေအိမ်တံခါး’ သည်လည်း ကျေးဇူးရှင်ပင် ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။ သို့ဆိုပါလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ ကျေးဇူးရှင်တံခါးကို မညှာမတာ မကြင်နာ ၀ုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ ဆွဲဖွင့် ဆွဲပိတ်ပြုလုပ်သင့်ပါသလား။ ပို၍ဆိုးသည်က အကောင်းပကတိဘ၀မှ ဂိလာနဘ၀ အသွင်ပြောင်းလာသော ရောဂါသည် တံခါးကို ယုယုယယ ကြင်ကြင်နာနာမဆက်ဆံဘဲ ‘သူ့ကျေးဇူး ဘာရှိလို့လဲ’ ဆိုသည့် သဘောနှင့် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ကန်ကျောက်ကာ ထားပစ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် အတူနေအိမ်သားများ ရေအိမ်တံခါးကို ထိုကဲ့သို့ ပြုမူဆက်ဆံကြသည့်အခါတိုင်း ရေအိမ်တံခါး၏ ငိုညည်းသံကို ကြားယောင်လာသည်ဟုပင် ထင်မိပါသည်။ ကျွန်တော့်နားထဲမှာတော့ ‘အောင်မယ်လေးဗျာ ကျုပ်ခါးရိုးတွေ ကျိုးပါပေါ့လား’၊ “ကျုပ်နံရိုးတွေ ဂျိုးဂျိုးဂျွတ်ဂျွတ်မြည်လာပါပေါ့လား” ဟု အသံထွက် အော်ညည်းသံများကိုပင် ကြားယောင်လာမိသလိုပင်။
ကျွန်တော်တို့၏ ‘ရေအိမ်တံခါး’ သည် အပစ်ပယ်ခံဘ၀နှင့် နိဂုံးမချုပ်သင့်ပေ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ အလေးတယူ နေရာပေးခြင်းမခံရသည့် ‘အထီးကျန်ဘ၀’ နှင့် ဘ၀အဆုံးမသတ်သင့်ပေ။ သူသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် မရှိမဖြစ် အရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မည်သူမှ မငြင်းဆန် မတွန်းလှန်နိုင်ပါ။ သူနှင့် မခေါ်မပြောဘဲနေ၍ရသော်လည်း သူနှင့်မဆက်ဆံ မပတ်သက်ဘဲ နေ၍တော့မရသည်မှာ သေချာပါသည်။ တကယ်တော့ သူသည် ကျွန်တော်တို့၏ အညစ်အကြေးများကို လှပစွာ ဖုံးကွယ်ပေးထားသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို မညည်းမညူ သယ်ပိုးထမ်းရွက်ပေးထားသော ၀န်ထမ်းကောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကျန်းမာရေး လှပရေး စမတ်ကျရေးအတွက် အဖက်ဖက်ကနေ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေသူလည်းဖြစ်သည်။ တွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ သူသာမရှိခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်များ ပေရေညစ်ပတ်နံစော်နေလိမ့်မလဲ။ သူသာ မကူညီခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်များ ရောဂါဘယတွေ ထူပြောနေပါလိမ့်မလဲ။ သူသာမကယ်လျှင် ကျွန်တော်တို့မှာ သေဖွယ်ရာသာရှိတော့သည် မဟုတ်ပါလား။ သူ့လောက် ကျွန်တော်တို့အပေါ် အနွံတာခံသည်မှာ သူသာရှိပါသည်။ သူ့လောက် ကျွန်တော်တို့ဆိုးသမျှ တေသမျှ ပေသမျှ ညစ်ပတ်သမျှ မရွံမရှာ သုတ်သင်ဖယ် ရှားရှင်းလင်းပေးသည်မှာ သူသာရှိပါသည်။ တွေးကြည့်လေလေ သူသည် တကယ့်ကျေးဇူးရှင် ပီသလေလေပင်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် သူ့ကိုယ်စား ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါသည်။ အနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ခေါက်တော့ မလွဲမသွေ ဆက်ကိုဆက်ခံရမည့် ရေအိမ်တံခါးကို ဥပေက္ခာနှလုံးသားနှင့် ကျောခိုင်းစွန့်ပစ်ချန်ထားမရစ်ခဲ့ကြပါနှင့် မိတ်ဆွေတို့။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရေအိမ်တံခါးလေးကို ညင်ညင်သာသာ ကြင်နာယုယ ဖွဖွကလေး ပိတ်ပေးကြစေချင်ပါသည်။ ရေအိမ်တံခါးက အဆင့်နိမ့်ပြီး ဧည့်ခန်းတံခါးက အဆင့်မြင့်သည်ဟုဆိုကာ လူတန်းစားခွဲခြားသလို တံခါးအမျိုးအစား ခွဲခြားမဆက်ဆံလိုက်ပါနှင့်ဟု ရေအိမ်တံခါးကိုယ်စား ကျွန်တော် တောင်းပန်စကားဆိုလိုက်ချင်ပါသည်။
Posted in FeaturesLeaveaComment on ရေအိမ်တံခါး
သဒ္ဒါပန်းပွင့်တောင်ပေါ်က သစ်လွင်လွန်းသည့် နေရောင်ခြည်များ
Posted on April 20, 2018 by Eleven Media Group
(ဓာတ်ပုံ – ငြိမ်းဝေ)
(၁) ဇွဲကပင်တောင်ထိပ် ဆံတော်ရှင်စေတီတော်မြတ် ကြေးခေါင်းလောင်းသံတွေက တောင်ထိပ်ကတစ်ဆင့် တောင်အောက်ကို လွင့်ကျသွားနေခဲ့ကြတယ်။
နေရောင်ခြည်ကလည်း တကယ့်ကို သွေးနုသားနုလို ၀ါဖျော့ဖျော့လေးဆိုပေမယ့် ကြည်ကြည်လင်လင် ရှိလှပါတယ်။ ကွင်းပြင်ကြီးတွေနဲ့ တောင်ကုန်းတွေပေါ်ကျော်ပြီး တိုက်ခတ်လာနေတဲ့ မြောက်ပြန်လေက မအေးစက်စက် အေးစက်စက်။
ကျွန်တော်တို့ လူသိုက် ဇွဲကပင်တောင်ပေါ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ တစ်ည အိပ်ကြပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကျောင်း ဒုကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးနန္ဒိယရဲ့ အကူအညီနဲ့ တောင်ပေါ်ကျောင်းမှာ သက်သောင့်သက်သာ အိပ်စက်ခွင့်ရခဲ့ကြတာပါ။
နံနက် ၄ နာရီလောက်မှာ အိပ်ရာထကြပါတယ်။ အပြင်ဘက်ထွက် ရင်ပြင်တော်ပေါ်တက်ကြည့်တော့ နေရောင်ခြည် မမြင်ရသေးလို့ ၅ နာရီခွဲကျော်တဲ့အထိ စောင့်ကြပါတယ်။
ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်က အောက်တစ်ဆင့် ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းလို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ လွင်ပြင်ငယ်နေရာဆီ ဆင်းကြပါတယ်။ မြေကွက်လပ်ထိပ်မှာ ကိုယ်စီရပ်ပြီး ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ဆည်းဆာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေ တစ်ပုံပြီး တစ်ပုံ တရစပ်လိုက်ရိုက်ရင်းက နေရောင်ပြပြအောက် ခပ်ဝါ၀ါး ခပ်ပါးပါး တောင်ထွတ်တချို့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်နေရင်းက စိတ်ထဲဝင်လာတဲ့အတွေးက ဒီဇွဲကပင်တောင်ကြီးဟာ တစ်ချိန်က သင်္ဘောတွေ၊ လှေတွေ၊ ဖောင်တွေ ဆိုက်ကပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မှန်းဆချက် စကားတွေပါပဲ။
ပြီးတော့ ဒီတောင်ကြီးကို အရင်တုန်းက ဗန္ဓ၀ဂီရိတောင်လို့လည်း ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံတွေက သဒ္ဒါပန်းတွေ ပွင့်လွန်းလို့ သဒ္ဒါပန်းပွင့်တောင်လို့လည်း အမြတ်တနိုး ခေါ်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်က ဒီဇွဲကပင်တောင်ကြီးပေါ်က အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းလောင်းတော်ကြီးဆီကို ရောက်နေပါသေးတယ်။ ဇွဲကပင်စေတီတော်ဂေါပက အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဦးအန်းဆိုင်းသည် အဲဒီခေါင်းလောင်းတော်ကြီး ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ အလုပ်သမား အများအပြား ငှားရမ်းပြီး ချောက်ကြီးထဲဆင်းလို့ ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကို ရှင်းလင်း ရှာဖွေခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ခေါင်းလောင်းကြီးကိုတော့ မတွေ့ရ။ တောတောင်ကထူ ချောက်က နက်လွန်းလို့ ခေါင်းလောင်း ရှာဖွေရေးကို ရပ်တန့်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇွဲကပင်တောင် အနောက်ဘက်အခြမ်းက တက်လာရင် ရေတံခွန်စခန်းအလွန်မှာ ကရင်အခေါ် ‘ဒုံလွေ့’ လို့ခေါ်တဲ့ ‘ခေါင်းလောင်းကျစခန်း’ ကလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာက မတ်စောက်တဲ့ ချောက်ကြီးဖြစ်နေတာမို့ အောက်ကိုဆင်းကြည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအောက်က ချောက်ကြီးထဲမှာ ရင်ပြင်တော်ပေါ်က ပြုတ်ကျခဲ့ဖူးတဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီးရဲ့ အပိုင်းအစတွေ ရှိနေကြလိမ့်မယ်လို့ ဒေသခံတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။
(၂) ဇွဲကပင်တောင်ဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အမြင့် ၂၃၇၂ ပေ မြင့်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ အဆိုအရ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ဘုရားနဲ့ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်က ၃၆၁၅ ပေ မြင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ကာ ဇွဲကပင်တောင်က ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ထက် ပိုနိမ့်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်တက်လမ်းတွေက ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ထက် ပိုပြီးမတ်စောက်ကြပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ ပိုပြီးထူထပ်ပါတယ်။
ဇွဲကပင်တောင်ထိပ်မှာ တည်ထားတဲ့ ဘုရားသမိုင်း စာအုပ်တွေထဲမှာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အခြားအခြားသော ဘုရားသမိုင်း စာအုပ်တွေလိုပဲ လက်တွေ့ကျကျ ယုံကြည်ဖို့ရာ ခက်ခဲလှတဲ့ ပုံပြင်ဆန်ဆန်သမိုင်းတွေကို တွေ့ရပေမယ့် တစ်ချိန်တုန်းက ဒီနေရာ ဒီဒေသ တစ်ဝိုက်ဟာ ပင်လယ်ကြီးအောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ပုဂံနဲ့ခေတ်ပြိုင် သုဝဏ္ဍဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ သထုံမြို့ဟာ တစ်ချိန်က ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ခိုင်မာတဲ့သမိုင်းအရ ဇွဲကပင်တောင်ကြီး ပင်လယ်ရေအောက်ရှိ နေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါ။
တစ်ခါ မနေ့တုန်းက ကျွန်တော်တို့ တောင်ပေါ်တက်လာခဲ့ရာ လမ်းကို ပြန်စဉ်းစားမိပြန်တယ်။ တကယ်တော့ ဇွဲကပင်တောင် တက်လမ်းက နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အနောက်ဘက်က တက်တဲ့လမ်းနဲ့ အရှေ့ဘက်ကတက်တဲ့ လမ်းဆိုပြီး တောင်တက်လမ်း နှစ်ခုပါ။ အနောက်ဘက်က တက်တဲ့လမ်းက မြေလမ်းဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်တောင်တက်လမ်းက အင်္ဂတေ ကျောက်ခင်းလှေကားထစ်တွေ ခင်းထားတဲ့ လမ်းဖြစ်ပြီး အဲဒီလမ်းက လမ်းဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်လမ်းက မြေလမ်းဖြစ်ပြီး တောင်အောက်ရှုခင်းတွေ မြင်သာတဲ့လမ်းဖြစ်လို့ အဲဒီအနောက်ဘက်တောင်တက်လမ်းနဲ့ တက်ကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ အနောက်ဘက်တောင်တက်လမ်းက အချိန်သုံးနာရီလောက် နားနားနေနေ တက်လို့ရပြီး အရှေ့ဘက်လမ်းဟောင်း ကျောက်လှေကားထစ်လမ်းက လမ်းပိုပြီး တိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလမ်းက မြေလမ်း လမ်းသစ်ထက် ပိုပြီး မတ်စောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အတက်မှာ အနောက်ဘက်လမ်းကို ရွေးခဲ့ပြီး ပြန်ဆင်းတဲ့အခါ အရှေ့ဘက်လမ်းက ပြန်ဆင်းကြဖို့ စဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တစ်သိုက် ဇွဲကပင်တောင်ထိပ်က မြင်ရတွေ့ရတဲ့ ဂမ္ဘီရဆန်လွန်းလှတဲ့ ဆည်းဆာမြင်ကွင်းတွေကို တစ်ခုမှ မလွတ်အောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။ ဇွဲကပင် တောင်ထိပ်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ ဆည်းဆာမြင်ကွင်းကြီးဟာ အချိန်နဲ့အမျှ အရောင်တွေ ပြောင်းချိတ်သွားနေပြီး တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန် တော့်မှာ ကင်မရာခလုတ် မနှိပ်မိနိုင်လောက်အောင် တအံ့တသြ ငေးကြည့်မိပါတယ်။
(၃) ညရောက်တော့ လမပြည့်မီတစ်ရက် အလိုဖြစ်တာမို့ ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ လရောင်တွေ ခင်းပေးထားသလို ဖြစ်နေတာမို့ ကျွန်တော် တော်တော်ပျော်သွားရပါတယ်။ လထွက်လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းဆိုသလို ရင်ပြင်တော် ဘေးစောင်းတန်းအောက်မှာ ဆရာတော်ဦးနန္ဒိယရဲ့ စီမံခိုင်းစေမှုနဲ့ ဖျာသုံး လေးချပ်၊ လက်ဖက်သုတ် သုံးလေးပန်းကန်၊ ရေနွေးဓာတ်ဘူးတွေ ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဖျာပေါ်မှာ သွားစုထိုင်ကြပါတယ်။
အနည်းငယ်သာ အေးတာမို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အနွေးထည်တောင် မ၀တ်ကြပါဘူး။ ချမ်းစိမ့်စိမ့်လေကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ စိတ်အထင် ညကျရင်တော့ အေးတော့မှာပဲလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ ထင်သလိုမဟုတ်ဘဲ ခပ်နွေးနွေး ခပ်အေးအေးလေးပဲ ဖြစ်တာမို့ တစ်နေကုန် တောင်ပေါ်တက်လာရလို့ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ပျောက်ကင်း သက်သာသွားရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စကားဝိုင်းကို ဆရာတော် ဦးနန္ဒိယကပဲ ဦးဆောင်ပါတယ်။ ဆရာတော်က ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ဘုရားနဲ့ ကရင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်အကြောင်း၊ ဇွဲကပင် တောင်ပေါ်ဘုရား တစ်စတစ်စ ပိုမိုခိုင်မာ တင့်တယ်လာစေရေး ကြိုးပမ်းမှုများအကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
ဆရာတော်ရဲ့ ပြောစကားတွေထဲမှာ သူဟာ ဇွဲကပင်တောင်ကို တစ်နေ့ သုံး လေးခေါက် အဆင်း အတက် လုပ်ခဲ့ရတာ ၁၀ နှစ် ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး တအံ့တသြ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အတက်တစ်ကြောင်းထဲနဲ့တင် ဆက်မတက်နိုင်လောက်အောင် ပင်ပန်းခဲ့ကြတာမို့ ဆရာတော်က တစ်နေ့တည်း နှစ်ခေါက် သုံးခေါက်လောက် အဆင်း အတက် လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ အားလုံး ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ် ကုန်ကြရတာပေါ့။ ဆရာတော်ဟာ ဇွဲကပင် တောင်ပေါ်ဘုရားပြုပြင်ရေး၊ ဘုရားစောင်းတန်းနဲ့ ဘုရားဖူးခရီးသည်တွေ အဆင်ပြေနားနေနိုင်ရေး အဆောက်အအုံတွေအတွက် သဲ၊ ဘိလပ်မြေနဲ့ တခြားဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကို ၁၀ နှစ်ခန့် နေ့စဉ် နှစ်ခေါက် သုံးခေါက် ထမ်းပိုးပြီး အတက်အဆင်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အံ့သြလေးစားခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒီကြားထဲ ဇွဲကပင်တောင်ထိပ်မှာ မိုးတွင်းကျရင် ခဏ ခဏ မိုးကြိုးပစ်ခံရလေ့ ရှိတာကိုလည်း ဆရာတော်က ပြောပြပါတယ်။ မိုးကြိုးလွတ်အောင် နည်းလမ်းပေါင်းစုံ အသုံးပြုခဲ့ရပုံတွေကိုလည်း ကြားခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ နေ့တိုင်းနီးပါး မိုးကြိုးပစ်ခံရတတ်တာကိုလည်း ကြားခဲ့ရပါတယ်။ မိုးကြိုးလွှဲတွေ နေရာအနှံ့ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကြားက မိုးကြိုးကတော့ ပစ်နေတာပါပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အလှူခံအသံချဲ့စက် ၀ါယာကြိုးတစ်လျှောက် မိုးကြိုးပစ်လို့ မီးတန်းကြီး လျှောက်ပြေးနေတာ၊ အဆောက်အအုံတချို့ ပျက်စီး လွင့်စင်သွားတာကို ကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြည့်လို့ တွေ့နေရတာလည်း ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပိုပြီးတုန်လှုပ်ကုန်ကြရပါတယ်။
ဒီတုန်းက ကျွန်တော်က မိုးတွင်းဆိုရင် တိမ်တွေ ဒီထက်လှမှာ သေချာတယ်၊ မိုးတွင်းကျရင် မဖြစ်မနေ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ် တက်လာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရရင်ကောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့တာဆိုတော့ ဆရာတော် ဦးနန္ဒိယရဲ့ ဇွဲကပင်တောင်ထိပ် မိုးကြိုးအပစ်ခံရတဲ့ အတွေ့အကြုံ ကြားရတော့ အဲဒီကျွန်တော့်ရဲ့ မိုးတွင်းကာလ တောင်ပေါ်တက်လာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ်ကို အသာလေးပဲ မျိုချထားလိုက်ရပါတော့တယ်။
(၄) ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ဘုရားကို နောင်နှစ်လောက်စပြီး ကောင်းကင်ကေဘယ်ကြိုး တပ်တော့မယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ ခရီးသည်တွေဟာ တောင်တက်လမ်းအတိုင်း ပင်ပင်ပန်းပန်း မတက်ရတော့ဘဲ ကောင်းကင်ကြိုးနဲ့ တက်လို့ရတော့မယ့်သဘောပါပဲ။ ပဏာမ တိုင်းတာမှုတွေလည်း လုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇွဲကပင်တောင်ဟာ စီးပွားဖြစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖြစ် ခေတ်မီမီ အမြင်ကျယ်ကျယ် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် နေ့ချင်းညချင်း စည်ကား တိုးတက်လာမယ့် နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စစ်မက်ကင်းဝေးဖို့တော့ လိုတာပေါ့လေ။
အခုတော့ ဒေသခံလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းများ၊ အစိုးရနဲ့ အဲဒီလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲထား (သူတို့အခေါ် ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ်ထိုး) ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဒါကလည်း အချိန်မရွေး ထိပါးသွားနိုင်သေးတာမို့ ဇွဲကပင် တောင်တက်ခရီး စည်ကားသိုက်မြိုက်ဖို့ အတွက် စိတ်ပူမိတာအမှန်ပါပဲ။ ဒီထက် ခိုင်မာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ဇွဲကပင်တောင်ဟာ ခံ့ညားလွန်းပါတယ်။ ဇွဲကပင်တောင်တက်ခရီးဟာ သာယာလှပလွန်းပါတယ်။ ပျော်ဖို့ကောင်း ကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအရလည်း တောင်တက်ခရီးဟာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ဇွဲကပင်တောင် သို့မဟုတ် ဗန္ဓာဂီရိတောင်ပေါ်က သစ်လွင်လွန်းတဲ့ နေရောင်ခြည်တွေ၊ ပျိုမြစ်ဆန်းကြယ်လှတဲ့ ဆည်းဆာမြင်ကွင်းတွေကို ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်တော့မယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ကရင်တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုသားချင်းတွေရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ဂုဏ်ယူစရာနေရာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဇွဲကပင်တောင်ကြီး ဒီထက်သာယာငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted in FeaturesTagged ဇွဲကပင်တောင်LeaveaComment on သဒ္ဒါပန်းပွင့်တောင်ပေါ်က သစ်လွင်လွန်းသည့် နေရောင်ခြည်များ
Posted on April 20, 2018 April 20, 2018 by Eleven Media Group
ကျွန်တော်၏ သုံးနှစ်ခွဲအရွယ် သမီးငယ်က သူ၏အဘွားလုပ်သူကို တစ်ခါတစ်ရံ “ဒါ လေးတောင်မသိဘူးလား။ ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား” ဟူ၍ ဆရာမလေသံဖြင့် ပြောသည်ကို ကြားရတိုင်း ကျွန်တော် ပြုံးမိသည်။ သူ့အဘွား လုပ်သူမှာလည်း ထိုသို့ပြောလေတိုင်း “အေး မေကြီးက မသိဘူး။ သမီး လုပ်ပြပါဦး” ဟူ၍ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရင်း ပြုံးနေတတ်သည်။
ကျွန်တော့်သမီးငယ်နှင့် သူ့အဘွားတင်မှ မဟုတ်၊ ကျွန်တော်သည် ထိုကဲ့သို့ မြေး အဘိုး စကားပြောခန်းများကို ကြားရမြင်ရတိုင်း စိတ်ထဲကြည်လင်သန့်ရှင်း၍ ပီတိဖြစ်နေမိတတ်သည်။ မျိုးဆက်တစ်ခု ကွာဟသွားသော လူသားနှစ်ဦးကြားက ဆက်သွယ်မှု ပုံစံသည် ချစ်စရာကောင်းနေ၏။ ကျွန်တော့် တွင် အဘိုးအဘွားတို့ မရှိတော့ပါ။ အဖေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားရော အမေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားတို့ပါ ကွယ်လွန်ကုန်ကြသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ သက်ရှိထင်ရှား ရှိခဲ့စဉ်အချိန်တုန်းကလည်း အတူနေခဲ့ရသည် မဟုတ်၍ ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိခဲ့သည် မထင်ပါ။
ငယ်စဉ်က နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များဆိုလျှင် အဘိုးအဘွားများရှိရာ နယ်ဘက် ကျေးရွာများသို့ မိသားစုလိုက် ရထားကြီးစီး၍ ပြန်ခဲ့ကြရဖူးသည်။ ကလေးဘ၀က ရန်ကုန်- မန္တလေး ရထားကြီးပေါ်တွင် ကျပ်ကျပ်သပ်သပ်စီးရင်း တစ်မျှော်တစ်ခေါ် လယ်ကွင်းများ ကို ကြည့်ရသည့် အရသာကိုတော့ ယနေ့အထိ မမေ့နိုင်။ ထိုစဉ်တုန်းက ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးစဉ်သည် ရထားဖြင့် ၁၆ နာရီခန့်အထိ မောင်းရသည်ကို မှတ်မိနေသည်။ မြို့တစ်မြို့ ဘူတာတစ်ခု ၀င်လေတိုင်း “ဒီမြို့မှာ ဘယ်လို လူတွေ နေပါလိမ့်” ဟူသည့် ကလေးအတွေး နှင့် ရထားပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့် အိမ်များ လမ်းများပေါ် စိတ်ဝင်တစား အလုအယက် ကြည့်ကြရင်း ပျော်ရွှင်နေတတ်ကြသော ကျွန်တော်တို့လို ကလေးငယ်များပင်လျှင် ပျင်းရိငြီးငွေ့လာအောင် စီးရသည့် အချိန်ပမာ ဏပင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
ညရောက်၍ ရထားပေါ် အိပ်ကြပြီဆိုလျှင်လည်း ကိုယ်လုံးသေးသေး ကလေးငယ်ငယ် ကျွန်တော်တို့မှာ သစ်သားထိုင်ခုံများအောက် ပုဆိုးစများခင်း ခွေခေါက်အိပ်ကြရသည်ကို အလွန်သဘောကျကြသည်။ အိမ်သာတက်ချင်၍ အိမ်သာရှိရာသို့ ကျော်နင်း ခွနင်း သွားရသည်ကို သဘောကျသည်။ အဖေအမေတို့က လမ်းတွင် စားရန် ထမင်း နှင့် ဟင်းလျာများကို ချက်ပြုတ်ပြီး စတီးငါးဆင့်ချိုင့်ကြီးများဖြင့် ထည့်လာကြ၏။ ထမင်းစားချိန်တန်လျှင် ရထားကြီး ယိမ်းထိုးလှုပ်ခါနေသည့်ကြားက ပါးစပ်ပေါက်နှင့် ဇွန်းတည့်အောင် ချိန်နေရသည်ကို ကစားနေရသလို ပျော်ရွှင်နေကြသည်။
ထိုသို့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း အဘိုးအဘွားများဆီသို့ အလည်အပတ် သွားရသည်ကို ပျော်ရွှင်ရခြင်းမှာ အဘိုးအဘွား များနှင့် တွေ့ရဆုံရခြင်းထက် ခရီးသွားရခြင်းကို ပျော်ရွှင်ရခြင်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော် တို့၏ အဘိုးအဘွားများသည် နယ်ဘက် ကျေးဘက်မှ တောသူတောသားကြီးများ ဖြစ်၍ မြေးများ၊ ကလေးငယ်များနှင့် ပွတ်တီးပွတ်သပ် နေချစ်စရာ ပလီစိခြောက်ချက် ပြော စသဖြင့် မနေတတ်ကြခြင်း များလားတော့ မသိနိုင်ပါ။ သားသမီး များလွန်းလှ၍ မြေးကလည်း များပြားလှသည်ဖြစ်ရာ နီးနီးကပ်ကပ် အတူတူနေကြသော မြေးများကိုသာ အဘိုး အဘွားများက ပိုချစ်သည်လားတော့ မပြောတတ်။
ကျွန်တော် ငယ်သေးသည့် သုံး လေးတန်းအရွယ်လောက်က အဖေ၏ အမေ၊ ကျွန်တော့်အဘွား ဆေးရုံတက်ရန် ရန်ကုန်သို့ တစ်ခေါက် လာခဲ့ဖူးသည်ကို မှတ်မိနေသေး၏။ အဘွားသည် သူ့အိမ်တွင်ရှိသော သံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ခွေးခြေခုံသေးတစ်ခုကို မတော်တဆ တိုက်မိရာက ခြေသလုံးတွင် အနာဖြစ်လေသည်။ ဆေးမလိမ်း ဆေးမစား ဂရုမစိုက်နေသောကြောင့် အနာက ရင်း၊ မန်း ၀င်၍ ရောင်ကိုင်းလာသည်။ ထိုအခြေ ရောက်သည်ကိုလည်း သိပ်အလေးမထား၊ အများပြောသမျှ ဟိုအရွက် ဒီအရွက်ဝါး၍ ကပ်သည်။ မရ။ အနာက ပိုရင်းလာသည်။ ထိုအခါ ဖယောင်းချက် နှစ်ကျပ်ဖိုးလောက် ၀ယ်ကပ်သည်။ မပျောက်။ ဤလိုနှင့် မသက်သာ အစာမစားနိုင်၊ အချိန်နှင့်အမျှ အော်ဟစ် ညည်းညူနေရသောကြောင့် နယ်မှ ဆေးရုံပြရာ အဆင်မပြေသည်နှင့် အဖေက ရန်ကုန် တက်ကုရန်ခေါ်ရင်း ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်က အဘွား ရန်ကုန်လာနေပြီး ဆေးကုသည့်အချိန် လေးလကျော် ငါးလနီးနီး ကာလသည် ထိုအဘွားနှင့် ကျွန်တော်တို့ အနီးကပ်ဆုံး နေရသည့် ကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အဘွားမှာ ဝေဒနာက ကြီးမားသည် ဖြစ်ရာ အမြဲလိုလို အော်ဟစ်ညည်းညူနေရ၍ မည်သူမျှ အနားကပ်မခံပါ။ အော်ငေါက်လွှတ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အနားမကပ်ကြပါ။ အဘွားရောက်ကာ စ ရက်များက ဆိုလျှင် အဘွား၏ အနာကြီးမှာ ပြည်ပုပ်အနံ့ပင် တထောင်းထောင်းဖြစ်နေရာ ကျွန်တော် တို့သည် အိမ်ပင် မကပ်ချင်ကြပါ။ ထို့နောက် အဘွားသည် ဘာမှမဟုတ်သည့် ဒဏ်ရာလေး မှတစ်ဆင့် အပ်နှင့်ပေါက်ရမည်ကို ပုဆိန်နှင့် ထွင်းရဖြစ်သကဲ့သို့ ခြေထောက်ကို ပေါင်လယ်လောက်မှ ဖြတ်လိုက်ရတော့သည်။
ထို့နောက် ဆေးရုံမှဆင်းပြီး အိမ်ပြန် ရောက်လာသည့်နောက် အဘွားသည် သူ့ ခြေထောက်တစ်ဖက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်ကို အင်မတန် ပူဆွေးဝမ်းနည်းလျက် တငိုငို တရယ်ရယ်ဖြစ်၍နေလေသည်။ (သူ၏ ခြေထောက်ဖြတ်မည်ကို ဆရာဝန်များအား မတား မြစ်ရကောင်းလားဟု ဆိုကာ အဖေ့ကိုပင် စိတ်ဆိုးနေခဲ့သည်ဟု နောက်ပိုင်းတွင် အဖေက စိတ်မကောင်းစွာ ပြန်ပြောပြ၍သိရသည်။) ခြေထောက်တစ်ဖက် ဖြတ်လိုက်ရ၍ အဘွား သည် ခြေတုကြီး တစ်ဖက်တပ်ရသည်။ထိုခြေတုကြီးနှင့် ကျင့်သားရအောင် လမ်းလျှောက် ကျင့်ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို မောင် နှမသုံးယောက်သည် ခုတင်ခြေရင်းတွင် တွေ့ ရသော ခြေတုကြီးကို ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အလွန်ကြောက်ကြသည်။ ထိုခြေတုကြီး နံဘေးမှ တစ်ယောက်တည်း မဖြတ်ရဲကြ။ နဂို ကပင် သံယောဇဉ်နည်းလှသော အဘွားနှင့် ကျွန်တော်တို့သည် သူ၏ ကြောက်စရာခြေတု ကြီးကိုပါ ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ အဘွားသည် ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင် ငါးလခန့်နေသွားခဲ့သော်လည်း ပို၍ချစ်ခင်မလာသည့်အပြင် ကြောက်စရာ လန့်စရာဖြစ်သွားတော့သည်။ အဘွားမှာ ကံဆိုးရှာပါသည်။ ခြေတုကြီးတစ်ဖက်နှင့် သူ့နေရပ်သို့ ပြန်သွားပြီး လေး ငါး ခြောက်လခန့်အကြာလောက်မှာပင် ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါသည်။
ထိုအဘွား၏ ယောက်ျား၊ အဖေ့၏အဖေ၊ အဘိုးနှင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ အစေးမကပ်ကြပါ။ ကျွန်တော်သည် ထိုအဘိုးနှင့် စကားတစ်ခွန်းပင် ပြောခဲ့ဖူးသည်ကို မမှတ်မိပါ။ သူ့အကြောင်းဆိုလျှင် မှောင်မည်းနေသော အခန်းငယ်တစ်ခုထဲတွင် ကတုံးကြီးနှင့် လူကောင် ထွားထွား အဘိုးကြီးတစ်ဦး ထုံးဘူးသေးသေး တစ်ခုထဲသို့ သူ၏ကြီးမားလှသော လက်ညှိုး ကြီးဖြင့်နှိုက်ကာ ကွမ်းရွက်ကို ထုံးသုတ်နေသည့် ပုံကိုသာ ကျွန်တော် မှတ်မိသည်။အခြား ဘာမျှ စဉ်းစား၍မရပါ။
အဖေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားတို့နှင့်စာလျှင် အမေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားတို့က ကျွန်တော်တို့နှင့် ပို၍နီးစပ်မှုရှိခဲ့ကြသေးသည်ဟု ဆိုနိုင်မည်ထင်သည်။ အမေ့ဘက်က အဘိုး နှင့် အဘွားသည် ကျွန်တော်တို့အိမ်သို့ တစ်ဦးလျှင် နှစ်ကြိမ်စီ ရောဂါဝေဒနာနှင့် မဟုတ်ဘဲ လာလည်ခဲ့ဖူးသည်ကို မှတ်မိနေသည်။ နှစ်စဉ်နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် ကျွန်တော်တို့မိသားစု အများဆုံးသွားဖြစ်သည်မှာလည်း အမေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားများရှိရာ မုံရွာမြို့ဆီသို့ပင်ဖြစ်၏။ကျွန်တော်တို့ကလည်း အဖေ့ဇာတိ ကျောက်ဆည်မြို့ထက်၊ အမေ့ ဇာတိ မုံရွာမြို့သို့ သွားရသည်ကို ပိုပျော်သည်။ ထိုအဘိုးအဘွားကို ပိုချစ်၍ တော့လည်း မဟုတ်ပါ။ မုံရွာမြို့သို့သွားသည့် အခါတိုင်း ကျွန်တော်တို့သည် ချင်းတွင်းမြစ် တစ်ဘက် ကမ်းရှိ အဘိုးရွာ ကံကုန်းနှင့် အဘွား၏ရွာ နတ်လပို့တို့ကို လှေစီး၍ သွားရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ရွာများသို့ရောက်သည့်အခါတွင်လည်း အဘိုးအဘွားတို့နှင့် နေခြင်းထက် အိမ်တကာလှည့် ထမင်းစားသောက်၊ ကြံသကာ ထန်းလျက်၊ အသီးအနှံစသဖြင့် အချိုပွဲတည်းရ သည်ကို ကြိုက်ကြ ကျေနပ်နေကြသည်က များပါသည်။ “ရန်ကုန်က ဘိုးတင်ပိုင် မြေး တွေ လာတယ်ဟေ့၊ ဒေါ်မြရင် မြေးတွေလာတယ်ဟေ့” ဟူ၍ တစ်ရွာလုံး လှည့်ပတ်အမျိုး တော်နေသည့်လူများအကြား အရေးပေးခံရသည်ကို ကလေးသဘာဝ ပျော်မဆုံးဖြစ်ရသည်။ ထိုသို့ရွာများကို ရောက်သည့် လေး ငါး ခြောက်ရက် တစ်ပတ်အချိန်များတွင် ကျွန်တော်တို့သည် အဘိုးအဘွားအိမ်များ၌ တစ်ရက်တလေမျှပင် ထမင်းစားလိုက်ရသည် မရှိပါ။ ဖိတ်ကျွေးသော အိမ်များ၌သာ လိုက်စားရင်း ပြန်ခဲ့ရသည်။ အချို့နေ့များဆိုလျှင် သုံး လေးနပ်ပင် စားရသေး၏။ ဟင်းဆိုသည်မှာလည်း ကိုရင်ဝတ် ရှင်ပြုတုန်းက စားခဲ့ရသည်ထက်ပင် ဟင်းခွက်များလွန်းလှ၍ ခေါင်းမဖော်စတမ်း ဖြစ်ရ၍ မပျော်ဘယ်ရှိဖြစ်မည်နည်း ဆိုသကဲ့သို့။
အဘိုးရွာ အဘွားရွာများသို့ သွားရတိုင်း အပျော်ရဆုံးအဖြစ်များမှာ ညီအစ်ကို မောင် နှမ တစ်ဝမ်းကွဲများနှင့် တောထဲ တောင်ထဲ လျှောက်သွား၊ ရေဆာလျှင်လတ်လတ်ဆတ် ဆတ်ချထားသည့် ထန်းရည်ချိုချိုသောက်၊ နီညိုရောင် ထန်းလျက်လုံးကြီးများ ချက်ကြ သည်ကို မီးထိုးကူရင်း မှင်တက်အံ့သြနေရ ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး စိတ်အပျက်ရဆုံးမှာ အိမ်သာ မရှိခြင်းတို့သာဖြစ်လေသည်။
အဖေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားတို့နှင့်စာ လျှင် အမေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားတို့နှင့် ပို၍ နီးစပ်သည်ဆိုရသော်လည်း တကယ်တော့ သည်းသည်းလှုပ်ချစ် သည်းသည်းလှုပ်အလို လိုက်ဆိုသည့် လက်ပွန်းတတီး ရင်းနှီးနေသည့် အခြေအနေမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါ။အမေ၏ အဖေ၊ ကျွန်တော်တို့အဘိုး ဦးတင်ပိုင်သည် စက်ဘီးပြင်သည့် ပိန်သွယ်သွယ် အသားညို ညိုနှင့် အဘိုးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ဆော့ကစားရင်း သူ့ အနားရောက်လာလျှင် ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတတွေကို ကြည့်ကာ သွားမရှိတော့၍ ခွက်ဝင်နေသော ပါးခွက်ကြီးနှင့် ပြုံးနေ လေ့ရှိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ကူးပေါက် သည့်အချိန်မျိုးတွင် “ငါ့ မြေးတွေမှာ စက်ဘီးရှိလား ဘိုးဘိုး စက်ဘီးပြင်ပေးမယ်” ဟု ဆိုကာ ကွင်းခွကြီးတစ်ခုကို လှည့်သည့် သဏ္ဌာန်ပြု၍ အဘိုးက ပြောတတ်သည်။
အမေ့၏အမေ အဘွား ဒေါ်မြရင် ကွယ် လွန်သည်မှာ အနည်းငယ်စော၍ကျွန်တော် တို့ငယ်ငယ်က အဘွားနှင့် စကားပြောခဲ့ဖူး သည်တို့ကို မှတ်မိနေသော်လည်း ဘာ အကြောင်းများ ပြောခဲ့သည်ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ အဘွားသည် အဘိုးဦးတင်ပိုင်ထက် လေသံ၊ အပြုအမူ၊ စိတ်ဓာတ်စသဖြင့် မာသည်ကိုတော့ ၀ိုးတ၀ါး မှတ်မိနေသည်။ အဘွား သည်အမေတို့ အလွန်ငယ်ရွယ်သေးသည့် အရွယ်က အတော်အသင့် ချမ်းသာခဲ့သော် လည်း အဘိုး ကျန်းမာရေးမကောင်းသည်ကို ကုသခြင်း၊ ငွေစက္ကူ ၁၀၀ တန်များ တရားမ၀င် ကြေညာစဉ်ကလည်း အကျိုးနည်းခဲ့ခြင်း၊ နောက် အခြားအကြောင်းကြောင်းများ တိုက်ဆိုင် ဂြိုဟ်ဆိုးဝင် စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်ကာ ဆင်းရဲခဲ့ရသည်ဟု အမေက ပြောပြဖူး၏။ ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့် အဘိုးက အသက် ရှည်ရှည်နေသွားရပြီး မာမာထန်ထန်ရှိသည့် အဘွားက ဦးစွာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်သည့် အမေ့ အမေ၊ ကျွန်တော်တို့အဘွား ဒေါ်မြရင်ဟုဆိုလျှင် ဆေးရွက်ကြီးအပြည့်ဖြင့် ဆန်ကောကို ပေါင်ပေါ်တင်လျက် ပြောင်းဖူးဖက်ကို လျှာနှင့်သပ်ကာ ဆေး သားထည့်ပြီး ဆေးလိပ်လိပ်နေသည့်ပုံ၊ ထို ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်ကြီးကို မီးခိုးတလုံးလုံး ဖြစ်အောင် ဖွာကာ ငုတ်တုတ်ကြီး ထိုင်နေသည့်ပုံတို့ကိုသာ မြင်ယောင်နေမိသည်။ အဘွား၏ ရုပ်သွင်သည် ထိုပြောင်းဖူးဖက် ဆေးလိပ်ကြီး၏ မီးခိုးတထောင်းထောင်းထဲ တွင် ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက် ၀ါးသွားလိုက်။
ယခုတော့ အဖေ့ဘက်၊ အမေ့ဘက် နှစ်ဘက်စလုံးမှ အဘိုးအဘွားများ တစ်ဦးမျှ မရှိကြတော့ပါ။ ကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီ။ကျွန်တော်သည်လည်း ကလေးအဖေတစ်ဦး ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော့်အစ်ကိုဆိုလျှင် ကလေး နှစ်ယောက်အဖေ စသဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် အဖေအမေ နေရာကိုရောက်လာကြပြီး အဖေတို့ အမေတို့သည် အဘိုးအဘွားနေရာကို ရောက်လာကြသည်။ ကျွန်တော်က ကလေးများကို သူတို့၏ အဘိုးအဘွားများနှင့် လက် ပွန်းတတီး ရှိစေချင်သည်။ ကလေးငယ်တစ် ဦးနှင့် အဘိုးအို၊ အဘွားအိုတစ်ဦး ပျော်တပြုံး ပြုံးဖြစ်နေသည့် မြင်ကွင်းကိုကြည့် ရသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်မှ အလှပဆုံး ရှုခင်းတစ်ခုကို ကြည့် ရသည်ထက် ပို၍ နှစ်လိုဖွယ်ရှိသည်ဟု ကျွန်တော်က ထင်မိသည်။
Posted in FeaturesTagged အဘိုး အဘွာ၊ မိသားစုLeaveaComment on အလှပဆုံး မြင်ကွင်း
သမ္မတသစ်၊ အသွင်သဏ္ဌာန်သစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးခရီး နီးလာမည်လား
သမ္မတတာဝန် စတင်ထမ်းဆောင်ရန် မတ် ၃၀ ရက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကတိသစ္စာပြုပြီးနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ နှုတ်ဆက်နေကြသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စည်သူ)
နှစ်ပေါင်း ၇၀ စွန်းလာနေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်တွင်းစစ်မီးကို ငြှိမ်းသတ်နိုင်မယ့် ကနဦးခြေလှမ်းတွေကို လှမ်းလာနိုင်ဖို့ဆိုတာ အစိုးရနဲ့သမ္မတသစ်အဖို့ စိန်ခေါ်မှုကြီးလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် အခွင့်အလမ်းတွေ၊ အလားအလာတွေကလည်း အစီအရီ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ အန္တိမ ရည်မှန်းချက်ဆီ ဦးတည်နိုင်ဖို့ဆိုရင် တိုက်ပွဲတွေ၊ စစ်ပွဲတွေ အမြန်ရပ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတသစ်အနေနဲ့ နှစ်နှစ်တာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပြန်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရင်း အသွင်သဏ္ဌာန်သစ်၊ ခြေလှမ်းသစ်တွေနဲ့အတူ အပြောင်းအလဲသစ်တွေကို ဖော်ဆောင်လာနိုင်ဖို့က တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အရေးကြီးသထက် ကြီးလာနေတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အကျပ်အတည်း၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အကျပ်အတည်းနဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကျပ်အတည်းတွေဟာ သော့ချက်အကျဆုံး ဖြစ်သလို ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီနေတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုလို့ပြောရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အကျပ်အတည်းနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အကျပ်အတည်းဆိုတာ ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီအကျပ်အတည်းကြီး သုံးရပ်စလုံးကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ တစ်ပြိုင်နက် ချဉ်းကပ် အဖြေရှာနိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျပ်အတည်း သုံးရပ်ကို တစ်ပြိုင်နက် ချဉ်းကပ် အဖြေမရှာ နိုင်ရင် ရေရှည်မှာ ဦးနင်း ပဲ့ထောင်၊ ပဲ့နင်း ဦးထောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အကျပ်အတည်း နဲ့ ဆက်စပ်ရင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင်လုံ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (အန်စီအေ)၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ စတဲ့နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းတွေကိုတော့ မြင်နေရပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေက ဆက်ဖြစ်နေသလို စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေက စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာလည်း သူတို့ရဲ့ နေရပ်ရင်းတွေနဲ့ ဝေးကွာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ အန်စီအေကို လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းမှာ အတော့်ကို ချူချာနေတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင်လုံ၊ တတိယ အစည်းအဝေးရက် သတ်မှတ်ဖို့ကလည်း အခုထက်ထိ အလှမ်းဝေးနေဆဲပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျပ်အတည်းဟာ တိုင်ပတ်နေတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တိုက်ပွဲတွေ၊ အပစ်အခတ်တွေ ရပ်စဲပြီး အချုပ်အခြာအာဏာရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေ သူတို့ရဲ့နေရပ်ရင်းတွေဆီ ပြန်အခြေချနိုင်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ တကယ်လို့ အစိုးရနဲ့တပ်မတော်က တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ တစ်ဖက်သတ် ရပ်စဲကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် သေနတ်သံတွေ စဲသွားဖို့ အလားအလာမြင့်မားလာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က အဲဒီလို အပစ်ရပ်ဖို့ကြေညာရင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း အပစ်ရပ်ဖို့ သဘောတူကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ကြလိမ့်မယ်လို့ နားလည်မိပါတယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေအကြား ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ထုံးနဲ့အညီ ပစ်တာခတ်တာတွေ မရှိအောင် ဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေ၊ အပစ်အခတ်တွေကြောင့် အချုပ်အခြာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ စစ်ဘေးရှောင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဟာ စားဝတ်နေရေးဒဏ်၊ ဆင်းရဲမွဲတေဒဏ်၊ ရာသီဥတုဒဏ်၊ ရောဂါဘယဒဏ် စတဲ့ ဒဏ်ပေါင်းစုံကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ၊ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ နေထိုင် အသက်ရှင် နေကြရဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့မလျော့ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီဒေသတွေမှာ မငြိမ်းချမ်းသရွေ့တော့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဟာ စစ်ဘေးကို ရှောင်နေကြရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီ အချိန်အထိလည်း အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ရှင် စစ်စစ်တွေဟာ ရှောင်နေ၊ ပုန်းနေ၊ ပြေးနေ၊ လွှားနေရဆဲဖြစ်တာကတော့ ငြင်းမရတဲ့ အချက်ပါ။ အဲဒါကြောင့် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်အနေနဲ့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ကိုယ်ဘာရမလဲဆိုတာထက် ကိုယ်က ဘာပြန်ပေးရမလဲ ဆိုတာကို နှလုံးသွင်းရင်း တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်ကြောင်း အဆောတလျင် ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ရင် အလွန် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မိမှာပါ။
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း တစ်ဖက်သတ် ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အစိုးရမှာ အဓိကတာဝန်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဟာ တပ်မတော်ရော၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရော အကြိတ်အနယ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးကို အဆောတလျင် ရုပ်လုံးပေါ်လာနိုင်ဖို့ အားစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်နိုင်ဖို့မှာ ပထမခြေလှမ်းအနေ နဲ့ အစိုးရဟာ တပ်မတော်နဲ့ဗျူဟာမြောက် ထိတွေ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုး၊ တန်ဖိုးထားတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ၊ သေနတ်သံတွေ ကျယ်လောင်လာပြီဆိုရင် အဲဒါကို အမြန်ဆုံးရပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ခေါင်းချင်းရိုက်ကြ၊ ဆွေးနွေး အဖြေရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကလည်း အသံမကြားရ၊ လွှတ်တော်တွေကလည်း ရပ်နားထားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ပိုတော့ စိုးရိမ်မိတာ အမှန်ပါ။ အမှိုက်ကစ ပြာသာဒ်မီးလောင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိချပ်နိုင်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၇ ရက် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့တုန်းက သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်က နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောတဲ့အခါ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုတဲ့ အသံတွေ လုံးဝပါမလာတာကလည်း စိတ်မောစရာဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ လတ်တလော စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေကို အမြန်ဆုံးလျှော့ချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို အဆောတလျင်ဆွေးနွေး ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ ပျက်ကွက်နေသရွေ့တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ သဲနဲ့ဆောက်တဲ့ အိမ်ပဲဖြစ်နေဦးမှာပါ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့် အနေနဲ့ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူပြီး၊ အရပ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေအကြား အကြိတ်အနယ် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ရော၊ တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်နိုင်ဖို့ရော လမ်းစတွေပေါ်လာမယ်၊ အလုပ်ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွေကို အရပ်ဘက်-စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး ပိုကောင်းအောင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်မယ့် စင်္ကြံလမ်းတွေအဖြစ် ဦးစီးဖော်ဆောင်သင့်တယ်လို့ သုံးသပ်၊ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကာလုံ ကောင်စီကို အစိုးရ၊ လွှတ်တော်က အရပ်ဘက် ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ တပ်မတော်ကစစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်တွေအကြား မျက်နှာစုံညီညှိ နှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်တဲ့ ပလက်ဖောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ၊ ဖော်ဆောင်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့တော့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ အဲဒီကာလုံ ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးစားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အကျပ်အတည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအကျပ်အတည်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဖိုင်တွေဟာ အမြဲတမ်းရှေ့ဆုံးကနေ နေရာယူထားဖို့လိုမယ်လို့လည်း ယူဆမိပါတယ်။ ကာလုံအစည်းအဝေးတွေကနေ စစ်ရေး တင်းမာတာတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေကို ထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချနိုင်အောင် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ဆွေးနွေးအဖြေရှာရင်း စိန်ခေါ်ချက်တွေကို အခွင့်အလမ်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့က ၀န်ကြီးတွေ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးတွေ လူစားထိုးဖို့၊ လူတိုးဖို့ ပြောနေသလို အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အင်စတီကျူးရှင်းကိုလည်း ပြန်ပြင်ဖို့ လိုနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြလိုပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး အင်စတီကျူးရှင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အတော့် ကို လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေသလို ကိုမာဝင်နေသလို ထင်ရလောက်တဲ့အထိ ငြိမ်သက်လွန်းနေပါတယ်။ အန်စီအေ စာချုပ်လက်မှတ် မရေးထိုးရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရော၊ အန်စီအေလက်မှတ် ထိုးပြီးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါ မျက်နှာစုံညီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမျိုးက အတော့်ကို အလှမ်းကျဲနေတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ အလွတ်သဘောရော၊ အလုပ်သဘောရော မျက်နှာစုံညီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ အကြိမ်များ လာလေလေ၊ ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှု တည်ဆောက်ရလွယ်ကူလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်သုံးသပ်မိပါတယ်။
လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးရှည်ကို ဆက်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ခရီးက ရှည်သထက် ပိုရှည်ဦးမှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင်လုံဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဦးတည်နေပြီဆိုရင် ခက်သထက် ပိုခက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမှာ တွန့်ဆုတ်နေသရွေ့၊ အလှမ်းဝေးနေသရွေ့၊ တိုက်ပွဲတွေရပ်စဲဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရုပ်လုံးဖော်ဖို့ ဆိုတာတွေဟာ အိပ်မက်ပဲဖြစ်နေဦးမယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ကြမ်းတမ်းပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အကျပ်အတည်းတွေ များပါစေ၊ စားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေ ရှာနိုင်ဖို့က ဗျူဟာမြောက် အရေးပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေက တော့ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာ၊ ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ အလွတ်သဘောရော၊ အလုပ်သဘောရော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်၊ အချိန်ဇယား သတ်မှတ်၊ လုပ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင် ပေါက်မြောက်ဖို့ နီးကပ်သထက်၊ နီးကပ်လာနေပြီလို့ ဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း သုံးသပ် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted in FeaturesTagged သမ္မတLeaveaComment on သမ္မတသစ်၊ အသွင်သဏ္ဌာန်သစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးခရီး နီးလာမည်လား
ဤစစ်ဘားကောင်စီ အခင်းအကျင်းကား ယနေ့တိုင် မပျက်ပြယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ ဖြေလျှော့မှုများ စတင်လာသည်ကို အသိအမှတ် ပြုကြရပါမည်။
၆-၁-၂၀၁၂ တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် ၀င်နှင်းဆီခန်းမ၌ ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကွန်ရက် အစည်းအဝေးတွင် ကျွန်တော်က “မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီကို လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရေး” စာတမ်းဖတ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော် ရှေ့နေလိုင်စင် ပြန်မရသေး။ ဇူလိုင်လတွင်မှ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေလိုင်စင် ပြန်ရခဲ့သည်။
၁၄-၉-၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သော ရှေ့နေများအသင်း (ILAM) အမှုဆောင်ကော်မတီ (Main Commltee) နှင့် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။ ဘားကောင်စီကိစ္စ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံ ရှေ့နေများ ခုခံချေပခွင့် ရရေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရရေးနှင့် ဧည့်နိုင်ငံသားများ အလုပ်သင်ရှေ့နေ ဆင်းခွင့်မရသည့်ကိစ္စ အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ တရားသူကြီးချုပ်က ဘားကောင်စီဥပဒေ ပြင်ဖို့ ဥပဒေပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးတင်ပြရန် အကြံပြုသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရှေ့နေများအဖွဲ့ချုပ် (IBA) တို့က ကမကထပြုပြီး အမျိုးသားအဆင့် တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သောရှေ့နေများအသင်း (ILAM) တွင် “မြန်မာနိုင်ငံ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ ကောင်စီ ဥပဒေ (မူကြမ်း)” သတ္တမအကြိမ်ထိ တည်းဖြတ်ပြီး အဆင်သင့် ရှိသည်။
ဤမူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ရောက်ရှိနေသော ကိုယ်စားလှယ် ရှေ့နေများကလည်း ထောက်ခံကြသည်။ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီများနှင့်လည်း ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဦးရွှေမန်းကော်မရှင်ဟု လူသိများသည့် “ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ ကော်မရှင်” သို့လည်း တင်ပြထားပြီး ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် လများအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ မဟာအက္ခရာ (Law Firm) က ဦးဆောင် ခေါ်ယူခဲ့သည့် အစည်းအဝေးကြီးက ဘားကောင်စီဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး တပ်လှန့် နှိုးလိုက်သည်။ ၂၅-၃-၂၀၁၈ နေ့တွင် “ပန်သူရိယ” ခန်းမ ဒုတိယအစည်းအဝေးက ဘားကောင်စီဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါပြီ။ ဤကော်မတီက ၁၉၈၉ ဘားကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေတွင် ဖြုတ်ခံထားခဲ့ရသည့် မူလပုဒ်မ (၄) နှင့် ပုဒ်မ (၆) တို့ကို ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန်သာဖြစ်၍ ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ချောနိုင်ပေမည်ဟု အများက ယုံကြည်ကြသည်။
ရှေ့နေများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် လွတ်လပ်သော ဘားကောင်စီတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာမှသာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ တာဝန်နှင့် ရပိုင်ခွင့်တို့ ပီပီပြင်ပြင် ရှိလာမည်ဆိုလျှင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်သည့် ရှေ့နေများကို အရေးယူရန် မလိုအပ်တော့ပြီလော။ ရှေ့နေရှေ့ရပ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည် မွန်မြတ်သန့်စင်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဖြစ်၍ အဖျင်းအမှော်များ ခဲသလဲများကို ဖယ်ရှား သုတ်သင်ရမည်ကား ယုံမှားဖွယ်မရှိ။ သို့ရာတွင် တရားမျှတရမည်။ ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ရပေလိမ့်မည်။
ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်မှု (Misconduct)
ဘားကောင်စီ အက်ဥပဒေတွင် (Misconduct) ၏ အဓိပ္ပာယ်တိကျစွာ ဖွင့်ဆိုထားခြင်း မရှိ။ ပုဒ်မ ၁၀ (၁) တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှု (Professional Misconduct) နှင့် အခြား ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်မှု (Other Misconduct) ဟု သုံးစွဲထားသည်။
“ ၁၉၈၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၈၆ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ တစ်ယောက်၏ ကိစ္စ” အမှုတွင် ထိုစဉ်က ဗဟိုတရားရုံးက “ဒေါက်တာဘဟန် ပြုစုသော အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘိဓာန်တွင် (Misconduct) ကို အကျင့်ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အကျင့်ဖောက်ဖျက်မှု၊ ဖောက်လှဲဖောက်ပြန်ဖြစ်မှု၊ ဖောက်လှဲ ဖောက်ပြန်ပြုခြင်း၊ အလွဲမကောင်းသော အကျင့်အကြံ အမူအရာအပြုအမူ၊ မကောင်းကျင့် မကောင်းကြံဟူ၍ ဘာသာပြန်ထားကြောင်း” ညွှန်ပြထားသည်။
Oxford တက္ကသိုလ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထုတ် အဋ္ဌမအကြိမ် “Dictionary of Law” စာအုပ်တွင် (Misconduct) ကို Incorrect or erroneous conduct (မလျော်ကန်သော သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်) ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သည်။ ဆက်လက်၍ Wilful Misconduct ကို အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သည်။
Wilful misconduct : Intentionally doing something that is wrong , or wrongfull omiting to do something, or doing something or omitting to do something that shows reckless indifference as to what the consequences may be.
(ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကျင့်ဖောက်ပြားမှု … မမှန်သည်ကို သိလျက်နှင့် ပြုခြင်း … တစ်စုံတစ်ရာကို မှားယွင်းစွာ ထိမ်ချန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို သိပါလျက် … တစ်စုံတစ်ရာကို ပြုရန် တမင်ပျက် ကွက်ခြင်း မဆင်မခြင် တာဝန်မဲ့ပြုခြင်း)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘားကောင်စီ ဥပဒေ၌ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော တိကျသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်မပါ စီရင်ထုံးများဖြင့်သာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
Moral turpitude – Test for striking off the rolls – Bar Councils Act, s.10(1). The test that the Court has to apply in Considering off the Roll of Advocates is whether the proved misconduct of the advocated is such that he must be regarded as unworthy to remainamember of the honourable profession to which he has been admitted, and unfit to be entrusted with the responsible duties that an advocate is called upon to perform. Ex Parte Brounsall,2Cowper 829 ; In re Weare , (1893)2Q.B.439 . followed. In re An Advocate , 46 Mad.903: Re Blake,3E.& E;34 : Re Hill, L.R.3 Q.B 543: In re A pleader 57 Cal. 337; In the matter of R.N.Mukerji, 22 All.49 , referred to. In THE MATTER OF ANADVOCATE.
ကိုယ်ကျင့် ဖောက်ပြားခြင်း- တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း ဘားကောင်စီအက်၊ (၁၀) ၁ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေတစ်ဦးအား စာရင်းမှ ပယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ဟိုက်ကုတ်က စဉ်းစားချိန်ဆရာတွင် သက်သေ ထင်ရှားပြပြီးသော စွပ်စွဲခံရသူ၏ အပြုအမူသည် ဂုဏ်သရေရှိ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ တစ်ဦးအဖြစ် ယင်း၏ အသိုက်အမြုံက ဆက်လက် လက်ခံရန် ထိုက်တန်ခြင်း ရှိ မရှိ၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ တစ်ဦးတွင် တင်ရှိသော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် ယုံကြည်ထိုက် မထိုက်ပင် ဖြစ်သည်။
၁၂ ရန်ကုန် ၁၁၀
နိုင်ငံရေး ပြစ်မှုသည် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်မှုလော
အထက်ပါ တင်ပြချက်များအရ ရှေ့နေတစ်ဦးကို အရေးယူနိုင်ရန် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်မှုဟူသည် ယင်းက အမှုသည်ပေါ် ဆုံးဖြတ်ပေးရန် ရှိသော ဥပဒေ ၀န်ဆောင်မှုကို တရားမဲ့ ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ရှေ့နေတစ်ဦး၏ အပြုအမူမှ ဖောက်လှဲ ဖောက်ပြန်ပြုခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းက တားမြစ်ထားသော အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတို့သာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
နိုင်ငံရေးအရ သဘောထား ကွဲလွဲသဖြင့် အာဏာရသူက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခံရသူကို ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်သူဟု စွပ်စွဲလျှင် တရားမျှတပါမည်လား။ ထိုအပြစ်ပေးသူသည် နိုင်ငံရေးအရ အာဏာလက်လွတ်၍ နိမ့်ပါးချိန်တွင် နိုင်ငံရေးအရ ပြစ်ဒဏ် ချခံရသည်ကို ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်သည်ဟု ဗုံလုံတစ်လှည့် ငါးပျံတစ်လှည့် စွပ်စွဲနေကြလျှင် တရားမျှတသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါ့မလား။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုနီ လက်ထက်တွင် ရုံးထုတ်သည့် အကျဉ်းသားများကို နောက်အမှုရှိပါက သံခြေချင်းခတ်၍ ရုံးထုတ်ရန် ပြန်လည် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဘ၀မှ အကျဉ်းသားတစ်ဖြစ်လဲ ဦးဘိုနီ သံခြေချင်းနှင့် ရုံးထုတ်ခံခဲ့ရရာ များစွာ သံဝေဂရဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးက နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက် ပုန်ကန်မှု ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ- ၁၂၂ (၁) အရ သေဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရသူ ဦးကျားမှာ သေဒဏ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီး ဖဆပလနှင့် မဆလခေတ်ထိ အလွန်ထင်ရှား ကျော်ကြားသော တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေကြီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ် စီမံမှုအက်ဥပဒေပုဒ်မ – ၅ (ည) အရ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် မည်သည့် အတားအဆီးမျှမရှိဘဲ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အထက်တန်းရှေ့နေ ဖြစ်လာပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ ဖြစ်လာသည်။
သို့ရာတွင် ၁၉၈၈ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီး၌ ကလေးသပိတ်နှင့် ရွှေဘိုသပိတ်ကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြသော ရှေ့နေ ဦးအေးမြင့် နှင့် ရှေ့နေ ဦးမြင့်သန်းတို့မှာ သေဒဏ်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ ရှေ့နေလိုင်စင် ပြန်လည် မရရှိပါ။
ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်သည့် ရှေ့နေကို အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းမှာ မှန်ကန်မျှတပါသည်။ ပြစ်မှုကြောင်းအရ အရေးယူခံရခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။ ထိုကိစ္စရပ်များအတွက် စောဒကတက်ဖွယ် မရှိပါ။ လိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံရသော ရှေ့နေအများစုမှာ စစ်အစိုးရ လက်ထက်က ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးမြို့က အထက်တန်းရှေ့နေ တစ်ဦးမှာ စစ်အစိုးရခေတ်တွင် လျှောက်လဲချက် တစ်စောင်ဖြင့် လိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
ရန်ကုန်မြို့က ရှေ့နေတစ်ဦးမှာ တရား မမှုတစ်မှုတွင် မိမိ အမှုသည်အား တရားပြိုင်အဖြစ်မှ ဖယ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာတင်သည်။ နားလည်မှုလွဲသော အမှုသည်က တိုင်ကြားသဖြင့် ထိုရှေ့နေလိုင်စင် ပြုတ်ရတော့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမှုသည်က သူမှားမှန်းသိ၍ တိုင်ကြားစာ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းသော်လည်း မမီတော့။ ရှေ့နေခင်ဗျာ ယနေ့အချိန်ထိ လိုင်စင် ပြန်မရရှာတော့။
ယနေ့အချိန် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ကျင်းပကာ ဒုတိယပင်လုံ ကြွေးကြော်သံဖြင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆီသို့ ချီတက်နေချိန် ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လက်နက်စွဲကိုင် အသေအကျေ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ် နေကြသူများ ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်းသို့ ရောက်နေကြချေပြီ။ ဤအခြေအနေတွင် မတရားလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံရသူ ရှေ့နေများဥပဒေအရ ခုခံချေပခွင့် မရခဲ့သည့် ရှေ့နေများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့်ပါသည်။ နိုင်ငံရေး ရန်ငြိုးဖြင့် ထောင်ချ၊ ဘ၀ပျက်စေရန် ထမင်းအိုးခွဲခံရသည့် ယခင် စစ်အစိုးရ၏ ရန်သူရှေ့နေများကို ပြည်သူ့အစိုးရ လက်ထက်တွင် ပြန်လည်ရှင်သန်ခွင့် ပေးသင့်ပါသည်။
Posted in FeaturesTagged ဦးသိန်းသန်းဦးLeaveaComment on တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ (၃)
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးလူသား အသက် ၁၁၇ နှစ်တွင် ကွယ်လွန်
ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးရန် လာရောက်မည့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၏ ခရီးစဉ်ကို တရုတ်က ကြိုဆို
နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်မှ အမေရိကန် နုတ်ထွက်ပါက ယူရေနီယံသန့်စင်ရေးကို အားကောင်းကောင်းဖြင့် ပြန်စမည်ဟု အီရန် ခြိမ်းခြောက်
မလေးရှား၌ ပါလက်စတိုင်း တက္ကသိုလ်ဆရာတစ်ဦး လုပ်ကြံပစ်သတ်ခံရမှုသည် အစ္စရေးမော့ဆက်၏ လက်ချက်ဟု စွပ်စွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်
ကရင်မလင်၏ ၀င်ငွေစာရင်းက အစိုးရအရာရှိများ၏ ကြွယ်ဝမှုကို ဖော်ပြနေ